Ch 11 Acts – 2hove
musha / Bhaibheri / MABASA AVAPOSTORI / Ch 11 Acts
MABASA AVAPOSTORI 11
11:1 Zvino vaApostora nehama dzaiva paJudhiya vakanzwa kuti vahedheni vagamuchirawo shoko raMwari.
11:2 ndokubva, apo Petro akanga aenda kuJerusarema, avo vekudzingiswa nharo pamusoro pake,
11:3 vachiti, "Nei iwe kupinda kuvarume vasina kudzingiswa, uye nei iwe kudya navo?"
11:4 Petro akatanga kutsanangurira kwavari, nenzira yakarongeka, vachiti:
11:5 "Ndakanga ndiri muguta reJopa ndichinyengetera, uye ndakaona, muchiyeverwa mupfungwa, chiratidzo: umwe mudziyo wakaburuka, sezvinoita mucheka mukuru jira hwakanaka unoburuswa kubva kudenga mana ayo. Zvino akaswedera kwandiri.
11:6 Uye akatarira mariri, Ndakaona uye ndakaona nemhuka dzine makumbo mana dzenyika, uye nezvikara, uye nezvinokambaira, uye zvinobhururuka zvinhu dzedenga.
11:7 Zvino ndakanzwa inzwi richiti kwandiri: 'Simukai, Peter. Baya udye. '
11:8 Asi ndakati: 'Never, tenzi! Nokuti kweinozivikanwa kana chisina kuchena hachisati chambopinda mumuromo mangu. '
11:9 Ipapo inzwi akapindura kechipiri richibva kudenga, 'Mwari chaachenesa, iwe usadana chakasviba. '
11:10 Zvino izvi zvakaitwa kusvikira katatu. Zvino zvose akatorwa ndokukwidzwazve kudenga.
11:11 uye tarira, pakarepo varume vatatu vamire pedyo neimba apo ndakanga, vatumwa kwandiri kubva kuKesariya.
11:12 Ipapo Mweya akandiudza kuti ndiende navo, asingakahadziki chinhu. Uye hama idzi nhanhatu dzakaendawo neni neniwo. Uye takapinda mumba murume.
11:13 Uye akarondedzera kwatiri sei wakaona mutumwa mumba make, amire achiti kwaari: Tumira varume kuJopa uye udane Simoni, unonzi Petro.
11:14 Achataura kwamuri mashoko, yamunofanira uchaponeswa neimba yako yose. '
11:15 Zvino ndakanga ndatanga kutaura, Mweya Mutsvene wakawira pamusoro pavo, sezvo pamusoro pedu, pakutanga.
11:16 Ipapo ndakarangarira mazwi aIshe, sezvo iye akati: 'John, chaizvo, akabhabhatidza nemvura, asi imi muchabhabhatidzwa noMweya Mutsvene. '
11:17 saka, kana Mwari akavapa renyasha, nechaakapa kwatiriwo, vakatenda muna Ishe Jesu Kristu, akanga I, kuti ini ndaizokwanisa rambidza Mwari?"
11:18 Wakati anzwa zvinhu izvi, vakanyarara. Vakarumbidza Mwari, vachiti: "Saka Mwari akaratidzwazve kuvahedheni kutendeukira kuupenyu."
11:19 Uye vamwe vavo, wakati vapararira nokutambudzwa kuti zvaitika pasi Stephen, vaifamba kumativi, kunyange kuFonisia uye nokuAndiyoki, kutaura Shoko munhu, kunze kuvaJudha chete.
11:20 Asi vamwe varume ava vaibva kuSaipurasi nokuKurini, Vakati vapinda kuAndioki, vakanga vachitaura nekuvaGiriki, vachiparidza Ishe Jesu.
11:21 Uye ruoko rwaShe rwakanga navo. Uye vazhinji vakatenda uye vakanga vatendeukira kuna Ishe.
11:22 Zvino mashoko akasvika munzeve Church paJerusarema pamusoro izvi, uye vakatuma Bhanabhasi kuti agure kunosvika Andiyokiya.
11:23 Zvino wakati asvika ikoko uye vaona nyasha dzaMwari, akanga wakafadza. Uye akavakurudzira vose kuti varambe vari munaShe ane yakasimba mwoyo.
11:24 Nokuti akanga ari murume akanaka, uye akazadzwa neMweya Mutsvene uye nekutenda. Uye chaunga chikuru ndokuwedzerwa kuna Ishe.
11:25 Zvino Bhanabhasi akaenda kuTasasi, kuti vatsvake Sauro. Zvino wakati amuwana, akauya naye kuAndiyoki.
11:26 Uye vakanga vachikurukurirana imomo muKereke kwegore rose. Vakandodzidzisa chaunga chikuru chakadai, kuti zvakanga kuAndiyoki kuti vadzidzi vakatanga kuzivikanwa nezita Christian.
11:27 Zvino mumazuva iwayo, vaprofita vaibva kuJerusarema vakaenda kuAndioki.
11:28 Uye mumwe wavo, ainzi Agabhusi, akasimuka, ndokuratidza kubudikidza neMweya kuti chaizova nzara huru pamusoro yose, iyo haina kuitika pasi Claudius.
11:29 Vadzidzi akataura, maererano nomumwe akagarwa, vaizoita kupa kuti akatumira kuhama dzigere muJudhiya.
11:30 Uye vakaita saizvozvo, vakatumira kuvakuru neruoko rwaBhanabhasi naSauro.
MABASA AVAPOSTORI 12
12:1 Zvino panguva iyoyo, Mambo Herodhi akawedzera rwake, kuti atambudze vamwe kubva Church.
12:2 Akabva auraya James, mukoma waJohani, nebakatwa.
12:3 Zvino wakati achiona kuti zvinofadza vaJudha, akaisa ruoko anotevera rekunzwisisa Petro. Zvino raiva mazuva ezvingwa zvisina mbiriso.
12:4 Saka wakati amubatawo, akamutumira mutirongo, vachipa iye pamusoro vakapinda kuchengetwa mapoka mana varwi vana, achida kubereka naye vanhu mushure mepasika.
12:5 Uye saka Petro akasungwa ari mujeri. Asi minamato kuitwa muchinyengetera, Nechechi, kuna Mwari nokuda kwake.
12:6 Zvino Herodhe wakati agadzirira kubudisa naye, mu usiku ihwohwo, Petro akanga akarara pakati pemauto maviri, uye akanga akasungwa nengetani mbiri. Uye pakanga varindi pamberi pamukova, anorinda tirongo.
12:7 uye tarira, mutumwa waShe akamira pedo, uye chiedza Akapenya muchitokisi. Uye tapping Petro parutivi, Iye kupepuka naye, vachiti, "Simuka, kurumidzai. "Uye ngetani dzakawa kubva pamaoko ake.
12:8 Zvino mutumwa akati kwaari: "Pfeka pachako, uye kupfeka majombo dzako. "Iye akaita saizvozvo. Akati kwaari, "Sunga nguo yako kumativi iwe unditevere."
12:9 Nokubuda, iye akamutevera. Uye haana kuziva chokwadi ichi: kuti izvi zvinoitwa nengirozi. Nokuti akafunga kuti akanga achiona chiratidzo.
12:10 Uye achipfuura wekutanga uye wechipiri varindi, vakasvika pasuwo reutare raipinda muguta; uye akazarura kwavari roga. Vakabva, vakaramba vari pamwe imwe divi mumugwagwa. Uye pakarepo mutumwa vakabva kwaari.
12:11 And Peter, Paakadzokera pachake, akati: "Zvino ndava kuziva, zvechokwadi, kuti Jehovha atuma ngirozi yake,, uye kuti akandinunura kubva pamaoko aHerodhi napazvinhu zvose kuti vanhu vechiJudha vakanga kutotarisira. "
12:12 Uye sezvo akanga kufunga izvi, akasvika kumba kwaMaria, mai John, wainzi Mako, vazhinji pavakange vakaungana vachinyengetera.
12:13 ndokubva, sezvaakaita agogodza pagonhi resuwo, mumwe musikana akabuda kupindura, ainzi Rodha.
12:14 Zvino wakati achiziva inzwi raPetro, kubva mufaro, haana kuzarura suwo, asi pachinzvimbo, akamhanyiswa, akashuma kuti Petro umire pamberi pesuwo.
12:15 Asi vakati kwaari, "Unopenga." Asi iye akadzokorora kuti izvi zvakanga zvakadaro. Zvino vakati, "Ingirozi yake."
12:16 Asi Petro wakange kutsungirira muchigogodza. Uye vakati vazarura, Ivo vakamuona, vakakatyamadzwa.
12:17 Asi akaninira navo rwake kuti vanyarare, akatsanangura sei Ishe akanga akamutungamirira kubva mujeri. Akati, "Zivisai Jakobho nehama idzodzo." Uye akabuda, akaenda kune imwe nzvimbo.
12:18 ndokubva, kana masikati akauya, kwakanga kusina diki ruzha pakati pemauto, kuti zvaitika pamusoro Peter.
12:19 Zvino Herodhe wakati akumbira iye uye havana kuwana iye, zvatakawana Varindi vakabvunzurudzwa, akavarayira vakaendwa. Nokuburuka achibva kuJudhea Kesariya, wakavatapo.
12:20 Zvino akatsamwira vaya Tire neSidhoni. Asi vakauya kwaari nemoyo umwe, uye, vanyengetedza Blastus, waichengeta mokuvata ramambo, ivo akakumbira rugare, nekuti nharaunda dzavo zvokudya naye.
12:21 ndokubva, musi musi, Herodhi akanga akapfeka samambo nguvo, uye iye akagara pachigaro chokutonga, uye akapa nhaurwa kwavari.
12:22 Ipapo vanhu vakanga vachishevedzera, "Inzwi ramwari, uye kwete remunhu!"
12:23 uye pakarepo, mutumwa waShe akamurova, nekuti akanga asina kupiwa rukudzo kuna Mwari. Uye wakati vavore nehonye, akapera.
12:24 Asi shoko raIshe kuwedzera uye vachiwanda.
12:25 Zvino Bhanabhasi naSauro, apedza ushumiri, vakadzoka vachibva kuJerusarema, vachiuya John, wainzi Mako.
MABASA AVAPOSTORI 13
13:1 Zvino pakanga, muKereke kuAndiyoki, vaporofita nevadzidzisi, pakati pavo vaiva Bhanabhasi, uye Simon, ainzi Black, naRukio muKurini, nokutsanya, uyo aiva munun'una zvinosimudzira naHerodhi mubati, uye Sauro.
13:2 Zvino Vakati vachishumira Ishe, nokutsanya, Mweya Mutsvene akati kwavari: "Kuparadzana Sauro naBhanabhasi kwandiri, nokuti basa chandakagadzirira vakasarudzwa kwavari. "
13:3 ndokubva, kutsanya nokunyengetera uye nokuisa maoko avo pamusoro pavo, vakavatuma.
13:4 Uye vatumwa neMweya Mutsvene, vakaenda kuSerukiya. Uye kubva ipapo vakaenda kuSaipuresi nechikepe.
13:5 Vakati vasvika paSaramisi, vachiparidza Shoko raMwari mumasinagoge evaJudha. Ivo vaiva John muushumiri.
13:6 Uye vakati akafamba chiwi yose, kusvikira kuPafosi, vakawana mumwe murume, n'anga, muprofita wenhema, muJudha, ainzi Bhari-Jesu.
13:7 Uye aiva pamwe chete nomutongi woruwa, Sergei Paul, murume wakachenjera. uyu, achiunganidza Bhanabhasi naSauro, aida kunzwa Shoko raMwari.
13:8 Asi Erimasi n'anga (nekuti zita rake rinoshandurwa) akamira pamusoro pavo, achitsvaka kutsausa mubati kubva Faith.
13:9 Ipapo Sauro, uyo anonziwo Pauro, vakazadzwa noMweya Mutsvene, akanyatsovatarira kwaari,
13:10 uye akati: "Saka uzere nokunyengera ose uye kwenhema zvose, mwanakomana wadhiabhorosi, muvengi wokururamisira zvose, iwe kumbomira kukanganisa nzira dzakarurama dzaIshe!
13:11 Saka zvino, tarira, ruoko rwaIshe rwuri pamusoro pako. Uye iwe uchava bofu, usingaoni zuva kwenguva yakareba nguva. "Pakarepo bvungapfunga uye rima rakavapo pamusoro pake. Uye achidzungaira, akanga achitsvaka munhu kuti vamutungamirire vakamubata ruoko.
13:12 Mutongi wacho woruwa, wakati aona zvakaitika, vakatenda, kuva achishamisika pamusoro nedzidziso yaIshe.
13:13 Zvino Pauro nevaiva naye akanga nechikepe kubva muPafosi, ivo vakasvika kuPega muPamfiriya. Zvino Johwani wakabva kwavari akadzokera kuJerusarema.
13:14 Asi zvechokwadi, ivo, kufamba vachibva paPega, vakasvika kuAndiyoki muPisidhiya. Uye pamusoro vachipinda musinagoge nezuva resabata, vakagara pasi.
13:15 ndokubva, Mushure mokuverengwa kwoMurayiro naVaprofita, vatungamiri vesinagoge vakatumira kwavari, vachiti: "Hama Noble, kana paine mamuri chero shoko rokukuridzira vanhu, taura. "
13:16 Ipapo Pauro, akasimuka uye achininira yokunyarara noruoko rwake, akati: "Varume vaIsraeri, nemwi munotya Mwari, nyatsoteerera.
13:17 Mwari wavanhu veIsraeri akasarudza madzibaba edu, uye akakwidziridza vanhu, kana vakanga kugara munyika yeIjipiti. Uye ane chinzvimbo chepamusoro ruoko, akavatungamirira kubva ipapo.
13:18 Uye yose nguva inene makore makumi mana, akatsungirira maitiro avo murenje.
13:19 Uye aparadza marudzi manomwe munyika yeKanani, akavagovera nyika yavo pakati pavo nemijenya,
13:20 pashure anenge mazana mana namakumi mashanu makore. Uye pashure pezvinhu izvi, akavapa vatongi, kunyange kusvikira kumuprofita Samueri.
13:21 Uye gare gare, ivo akakumbira mambo. Uye Mwari akavapa Sauro, mwanakomana waKishi, murume kubva kurudzi rwaBhenjamini, makore makumi mana.
13:22 Zvino wakati amubvisa, iye akavamutsira mambo David. Uye kupa uchapupu pamusoro pake, akati, 'Ndawana Dhavhidhi, mwanakomana waJese, murume maererano mwoyo wangu, uyo achaita zvose zvandinoda. '
13:23 Kubva vana vake, maererano Promise, Mwari akauyisa Jesu Muponesi kuna Israeri.
13:24 John akanga achiparidza, pamberi veMubatanidzwa chake, rubhabhatidzo rwekutendeuka kuvanhu vose vaIsraeri.
13:25 ndokubva, apo John akapedza kosi yake, akanga achiti: 'Handisi munhu iwe funga kuti ndive. nokuti tarisai, munhu anosvika pashure pangu, shangu dzetsoka dzake handina kufanira kuti ndisunungure. '
13:26 Noble hama, vanakomana vaAbhurahama, neavo pakati penyu vanotya Mwari, zviri kwamuri Shoko reruponeso urwu rakatumirwa.
13:27 Nokuti avo vaigara muJerusarema, uye vatongi vayo, Kuteerera kana iye, kana manzwi Vaprofita anoverengwa musi weSabata ose, akazadzisa idzi muchitonga naye.
13:28 Uye kunyange vasina kuwana mhosva yokuti rufu pamusoro pake, Ivo akateterera Pirato, kuitira kuti vamuuraye.
13:29 Vakati vapedza zvose zvakanga zvakanyorwa pamusoro pake, kutora pasi pake pamuti, vakaisa kwaari muguva.
13:30 Asi zvechokwadi, Mwari akamumutsa kubva kuvakafa nezuva retatu.
13:31 Iye wakaonekwa mazuva mazhinji neavo vakange vakwira naye kuJerusarema vachibva Garirea, uyo kunyange ikozvino muri zvapupu zvake kuvanhu.
13:32 Uye isu tiri kukuzivisai kuti Promise, iyo chakaitwa kumadzibaba edu,
13:33 rwazadziswa naMwari vana vedu nokumutsa Jesu, sezvarakanga zvakanyorwa rechipiri Pisarema: 'Ndiwe Mwanakomana wangu. Nhasi ndava baba imi. '
13:34 ikozvino, sezvo akamumutsa kubva kuvakafa, kuti hamucharambi kudzokera uori, iye akati izvi: 'Ndichakupa kwamuri zvitsvene David, chakatendeka. '
13:35 Uyewo panguva iyoyo, mune imwe nzvimbo, anoti: 'Hamuzobvumiri Mutsvene wenyu kuti aone kuora.'
13:36 For David, Wakati kuzoshumirwa kuchizvarwa chake maererano nokuda kwaMwari, kurara, uye akanga aisa pedyo madzibaba ake, uye akaona kuora.
13:37 Asi zvechokwadi, iye Mwari waakamutsa kubva kuvakafa, haana kuona kuora.
13:38 saka, ngazvizikamwe kwamuri, kuhanzvadzi, kuti kubudikidza naye ari yamagamuchirawo kuregererwa pazvivi uye kubva zvose zvamakange vakanga vasingagoni kururamiswa nomurayiro waMozisi.
13:39 maari, vose vanotenda vanonzi havana mhosva.
13:40 saka, chenjerera, zvimwe zvakataurwa navaprofita anogona kukukunda:
13:41 'Imi vaseki! tsvaka, uye mushame, uye ngavaparadzwe! Nokuti ndinobata chinhu pamazuva enyu, mumwe chamusingazombotendi mungadai kutenda, kunyange dai mumwe munhu akanga kuzvitsanangura kwamuri. ' "
13:42 ndokubva, pavakanga vachienda, vakavabvunza kana, zvinotevera weSabata, vanogona kutaura mashoko aya kwavari.
13:43 Zvino musinagoge akanga adzingwa, vazhinji pakati pavaJudha uye vanamati vatsva vakanga vachitevera Pauro naBhanabhasi. ivo, kutaura navo, vachivakumbira kuti varambire munyasha dzaMwari.
13:44 Asi zvechokwadi, zvinotevera weSabata, anenge guta rose zvikaungana kuzonzwa Shoko raMwari.
13:45 Zvino vaJudha, achiona zvaunga, vakazadzwa negodo, uye ivo, vachinyomba, vakapikisa zvinhu zvakanga zvichitaurwa naPauro.
13:46 Ipapo Pauro naBhanabhasi vakati zvakasimba: "Zvakanga zvakakodzera kuti shoko raMwari kwamuri imi kutanga. Asi nekuti iwe vanozviramba, uye saka mazvitongera kusafanira upenyu hwusingaperi, tarira, isu kuvahedheni.
13:47 Nokuti ndizvo IShe anotirayira: 'Ndakaisa uve chiedza kuvaHedheni, kuitira kuti kuuya ruponeso kusvikira kumugumo wenyika. ' "
13:48 Zvino vahedheni, pamusoro vachinzwa izvi, vakanga wakafadza, vakarumbidza Shoko raShe. Uye vazhinji vakatenda vakanga kufanoziviswa husingaperi.
13:49 Zvino shoko raJehovha rakanga neakangwara munyika yose.
13:50 Asi vaJudha vakakurudzira vamwe vakadzi vaitya Mwari uye vakatendeseka, navakuru veguta. Zvino vakamutsa vatambudzwe Pauro naBhanabhasi. Ivo avadzinga nhengo dzavo.
13:51 asi ivo, kuzunungusa guruva retsoka dzavo, akapfuurira kuIkoniamu.
13:52 Vadzidzi saizvozvo vakazadzwa nomufaro uye noMweya Mutsvene.
MABASA AVAPOSTORI 14
14:1 Zvino zvakaitika paIkoniyamu, vakapinda pamwe musinagoge revaJudha, uye vakataura nenzira kuti hune vazhinji vevaJudha nevaGiriki vakatenda.
14:2 Asi zvechokwadi, vaJudha vakanga vasingatendi akanga Vachikurudzirwa uye enflamed mweya vaHedheni kuvapesanisa nehama.
14:3 uye saka, vakaramba kwenguva refu, vakatendeka muna She, kupa uchapupu Shoko nyasha dzake, kupa zviratidzo nezvishamiso nemaoko avo.
14:4 Zvino chaunga cheguta chakakamurwa. uye zvechokwadi, Vamwe vaiva vaJudha, asi zvirokwazvo vamwe vaiva vaApostora.
14:5 Zvino kana kurwiswa akanga aronga nemaJentairi uye vaJudha nevatungamiriri vavo, saka kuti kuvabata kuzvidza uye namabwe,
14:6 ivo, kuziva izvi, vakatiza pamwechete kuRistira neDhebhe, kumaguta eRikaonia, uye kune yose yakapoteredza. Uye vakanga evhangeri munzvimbo iyoyo.
14:7 Uye mumwe murume akanga agere Ristra, akaremara makumbo ake, chirema kubva padumbu ramai vake, akanga asina kumbofamba.
14:8 Uyu wakanzwa Pauro achitaura. And Paul, akanyatsomutarira iye akarinzira, uye achiziva kuti akanga kutenda, kuti muporeswe,
14:9 akati nenzwi guru, "Simuka, uti tasa netsoka dzako!"Iye akasvetuka uye akafamba.
14:10 Asi zvaunga vaona zvakanga zvaitwa naPauro, vakasimudza manzwi avo norurimi rwechiRikonia, vachiti, "Vanamwari, atora zvimiro varume, vakabva kwatiri!"
14:11 Zvino Bhanabhasi, 'Jupiter,'Asi zvechokwadi vakadana Paul, 'Mercury,'Nekuti akanga achitungamirira mutauri.
14:12 wo, mupristi waZeusi, akanga kunze kweguta, pamberi pesuwo, vaiuya nehando namaruva kumasuo, aida kupa chibayiro pamwe nevanhu.
14:13 Uye panongopera vapositori, Bhanabhasi naPauro, akanga anzwa izvi, achibvambura nguvo dzavo, ivo leapt kupinda revanhu, vachidanidzira
14:14 uye vachiti: "Men, nei waizoita izvi? Nesuwo tiri vanhu venyama, Varume vakaita pachenyu, kuparidza kwamuri kuti mudzoke, pazvinhu izvi zvisina zvazvinobatsira, kuna Mwari mupenyu, iye akasika denga napasi, negungwa nezvose zviri mazviri.
14:15 In nezvizvarwa, akabvumira marudzi ose kuti afambe munzira dzavo.
14:16 asi zvirokwazvo, haana kuzvisiya asina uchapupu, kuita zvakanaka kubva kudenga, kupa mvura uye mwaka inobereka zvibereko, achizadza mwoyo yavo nechikafu nemufaro. "
14:17 Uye nokutaura zvinhu, vakanga padikidiki kukwanisa kudzora vazhinji kubva immolating kwavari.
14:18 Zvino vamwe vaJudha vakabva Andiyokiya neIkoniyamu yakasvikako. Vanyengetedza revanhu, Vakataka Pauro ndokumuzvuzvurudzira kunze kweguta, vachifunga kuti afa.
14:19 Asi vadzidzi vakanga vamire vakamupoteredza, Akasimuka, vakapinda muguta. Uye zuva rakatevera, akaisa ruoko naBhanabhasi kuDhebhe.
14:20 Vakati evhangeri guta iroro, uye vaita vazhinji vadzidzi, vakadzokera kuRistra, Ikoniyumu uye kuAndiyoki,
14:21 vachisimbisa mweya yevadzidzi, vachivakurudzira kuti vanofanira kuramba nguva dzose mukutenda, uye kuti zvakafanira kuti tipinde muumambo hwaMwari nomumatambudziko mazhinji.
14:22 Vakati hwasimbiswa vapristi kwavari muchechi imwe neimwe, uye vanyengetera nekutsanya, ivo akavarumbidza kuna Ishe, wavakanga vatenda.
14:23 Uye vaifamba nenzira yePisidhia, vakasvika muPamufiria.
14:24 Uye vakati vaparidza shoko raIshe paPega, vakapinda Ataria.
14:25 Uye kubva ipapo, nechikepe vakaenda kuAndiyokiya, apo pavakange vakumikidzwa munyasha dzaMwari kubata basa ravakanga zvatopedzwa.
14:26 Vakati vasvika uye vaunganidza pamwe kereke, vakarondedzera zvinhu zvikuru zvaitwa naMwari navo, uye kuti wakange azarurira sei mukova werutendo vahedheni.
14:27 Uye vakaramba kuti hapana shoma nguva nevadzidzi.
MABASA AVAPOSTORI 15
15:1 Uye vamwe, achiburuka kubva Judhiya, vakanga vachidzidzisa hama, "Kunze kwokunge madzingiswa, maererano netsika yakadzidziswa naMozisi, hamugoni kuponeswa. "
15:2 saka, kana Pauro naBhanabhasi vakaita kuduku kumukira navo, vakasarudza kuti Pauro naBhanabhasi, uye vamwe kubva anopikisa, vakwire vaApostora uye vapristi muJerusarema pamusoro mubvunzo uyu.
15:3 saka, vachitungamirirwa noMweya chechi, vakafamba kuburikidza Fenikiya uye Samaria, kutsanangura kutendeutsa vahedheni. Vakaitira mufaro mukuru pakati zvose hama.
15:4 Vakati vasvika kuJerusarema, vakagamuchirwa nekereke navapostori uye navakuru, kushuma zvikuru zvinhu zvakanga zvaitwa naMwari navo.
15:5 Asi vamwe kubva revaFarisi, vaya vaiva vatendi, akasimuka akati, "Zvakafanira kuti mudzingiswe uye kurayiridzwa kuchengeta Mutemo waMosesi."
15:6 Uye Vaapostora nevakuru vakuungana pamwe kuti kutarisira nyaya iyi.
15:7 Uye shure kukakavara kukuru padzakaitika, Petro akasimuka, akati kwavari: "Hama Noble, unozviziva, ichangopfuura mazuva, Mwari akasarudza pakati pedu, nemuromo wangu, VaHedheni vanzwe shoko Gospel uye kutenda.
15:8 And Mwari, uyo anoziva mwoyo, Nemwoyo uchapupu, nokupa Mweya Mutsvene kwavari, sezvakanga kwatiri.
15:9 Iye akasiyanisa chinhu pakati pedu navo, achinatsa moyo yavo nerutendo.
15:10 Naizvozvo ikozvino, munoidzirei Mwari kumanikidza joko pamitsipa yevadzidzi, izvo kana madzibaba edu kana isu tave kugona kutakura?
15:11 Asi nenyasha dzaIshe Jesu Kristu, tinotenda kuti vaponeswe, saizvozvo vo se kwavari. "
15:12 Zvino vazhinji yose akanyarara. Uye vakanga vakateerera kuna Bhanabhasi naPauro, kurondedzera chii zvikuru nezvishamiso Mwari zvaakaita pakati pevahedheni.
15:13 Uye mushure vakanga vakanyarara, James akapindura achiti: "Hama Noble, nditeererei.
15:14 Simon akatsanangura mune tsika Mwari pakutanga akashanyira, kuti atore vanhu kubva kuvaHedheni kuti zita rake.
15:15 Zvino nevaprofita zvinobvumirana iyi, sezvakanga zvakanyorwa:
15:16 'Pashure pezvinhu izvi, Ndichadzoka, uye ndichaita tende raDhavhidhi, yakawa pasi. Uye ndichavakazve matongo aro, uye ndichaita ungaimutsa,
15:17 saka kuti vakasara vevanhu vatsvake Ishe, pamwe ose pamusoro pake zita rangu rave naro, ndizvo zvinotaura Ishe, unoita zvinhu izvi. '
15:18 To Ishe, basa rake rave richizivikanwa kubvira pakusingaperi.
15:19 Nokuda kwaizvozvi, I kutonga kuti vaya vakanga vatendeukira kuna Mwari pakati pevahedheni vasingazomutswi vavhiringidzwe,
15:20 asi pachinzvimbo kuti isu kunyora kwavari, kuti vazvidzore kubva patsvina zvifananidzo, uye ufeve, uye kubva chero yave kutadza kufema, uye neropa.
15:21 For Moses, kubva kare, akava muguta rimwe nerimwe avo vanoparidza naye mumasinagogi, apo zvinoverengwa nomusi weSabata ose. "
15:22 Zvadaro zvakafadza Vaapostora nevakuru, pamwe yose Church, kusarudza varume pakati pavo, uye kuti atumire kuAndiyoki, Pauro naBhanabhasi, naJudhasi, wakatumidzwa Bhasabhasi, naSirasi, varume mukuru pakati pehama,
15:23 zvakanyorwa nemaoko avo pachavo: "Vaapostora nevakuru, hama, kune vaya vari paAndiyokiya, neSiria, neKirikia, hama kubva kuvaHedheni, kwaziso.
15:24 Zvatakanzwa kuti vamwe, achibuda pakati pedu, vakakutambudzai nemashoko, vachikanganisa mweya yenyu, akapa murayiro watinofanira,
15:25 zvakafadza isu, vaungana somunhu, kusarudza varume kuvatuma kwamuri, nevadikamwa vedu Bhanabhasi zvikuru uye Paul:
15:26 vanhu mumaoko hwavo nokuda kwezita raIshe wedu Jesu Kristu.
15:27 saka, tatuma Judhasi naSirasi, ivo vachaparidza, pamwe ataura shoko, mumutsiridze kwamuri zvinhu zvimwechetezvo.
15:28 Nekuti zvakaonekwa zvakanaka kuMweya Mutsvene nesu kuti kumanikidza haana mutoro pamusoro pako, kunze kwezvinhu izvi zvakafanira:
15:29 kuti mubve pazvakabayirwa zvinhu immolated zvidhori, uye neropa, uye kubva chii chave kutadza kufema, uye ufeve. Muchaita zvakanaka kuti murege izvi. Chisarai. "
15:30 uye saka, ndapera arega, vakaburukira kuAndiyoki. Uye kuunganidza chaunga pamwe, vakakumikidza tsamba.
15:31 Vakati vaverenga, vakanga wakafadza ne pekukurudzirwa ichi.
15:32 Asi Judhasi naSirasi, vaiva vaporofitawo pachavo, kunyaradza hama nemashoko mazhinji, uye vakanga akasimbiswa.
15:33 ndokubva, pashure garei yakawanda ikoko, vakanga vaendeswa rugare, nehama, kune avo vakanga vavatuma.
15:34 Asi zvakaonekwa zvakanaka naSirasi kuti kuramba ikoko. Naizvozvo Judhasi oga akaenda kuJerusarema.
15:35 Uye Pauro naBhanabhasi vakasara paAndiyokiya, nevamwe vazhinji, achidzidzisa uye evhangeri Shoko raShe.
15:36 ndokubva, pashure pemazuva, Pauro akati kuna Bhanabhasi, "Ngatidzokerei kushanyira hama ose maguta ratakakuparidzirai Shoko raShe, tione kuti dzakadini. "
15:37 Bhanabhasi aida kutora John, wainzi Mako, navo zvakare.
15:38 Asi Pauro akanga achiti haafaniri kugamuchirwa, sezvo akabva kwavari nenguva Pamfiriya, uye akanga asina kuenda navo kubasa.
15:39 Naizvozvo kwakava kukakavadzana, kuti zvokuti vakabva mumwe nomumwe. Bhanabhasi, zvechokwadi Mark, kuSaipuresi nechikepe.
15:40 Asi zvechokwadi, Paul, kusarudza Silas, teya, tasunungurwa nehama panyasha dzaMwari.
15:41 Iye akafamba kuburikidza neKirikia, achisimbisa Churches, Ndokuvaraira kuchengeta zvirevo AVAPOSTORI navakuru.
MABASA AVAPOSTORI 16
16:1 Akabva akasvika paDhebhe neRistra. uye tarira, mumwe mudzidzi ainzi Timoti paiva, mwanakomana womukadzi muJudha akatendeka, baba vake muGiriki.
16:2 Hama dzepaRistra neIkoniyamu waipa uchapupu hwakanaka naye.
16:3 Pauro aida murume uyu kuti afambe naye, akamuburusa, akamudzingisa, nokuda kwevaJudha vaiva munzvimbo idzodzo. Nokuti vose vaiziva kuti baba vake vaiva muGiriki.
16:4 Vakati vachifamba kuburikidza mumaguta, vakakumikidza kwavari nevanhu kuti ichengetwe, zvakanga akagadzwa kuvaapositori nevakuru vaiva paJerusarema.
16:5 uye zvechokwadi, Machechi vachiroorwa akasimbiswa mukutenda uye vachiwanda ose zuva.
16:6 ndokubva, achiyambuka kuburikidza Frigia nedunhu reGaratia, vakanga kudziviswa Mutsvene kutaura shoko paAsia.
16:7 Asi vakati vasvika pakatarisana neMisia, vakaidza kuenda Bhitinia, asi Mweya waJesu hauna kuvabvumira.
16:8 ndokubva, Vakati vayambukira kuburikidza napaMisia, vakaburukira Troasi.
16:9 Uye chiratidzo usiku chakaziviswa Pauro mumwe murume muMakedhoniya, amire achiteterera naye, uye vachiti: "Muyambuke kuMakedhoniya mutibatsire!"
16:10 ndokubva, pashure akaona chiratidzo, pakarepo tikatsvaka kuenda Makedhonia, ndapera nechokwadi kuti Mwari akanga atidana kuti evhangeri kwavari.
16:11 Uye nechikepe kubva kuTroasi, kutora zvakananga nzira, takasvika Samothrace, uye zuva rakatevera, pa Neaporisi,
16:12 uye kubva ipapo kuFiripi, ndiro guta mukuru munzvimbo Macedonia, muhutongi. Zvino taiva guta rino mamwe mazuva, vabvunza pamwe.
16:13 ndokubva, pazuva resabata, takanga kufamba kunze kwegedhi, pedyo norwizi, apo pane zvaiita munamato kuungana. Uye akagara pasi, takanga kutaura nevakadzi vakanga vaungana.
16:14 Uye mumwe mukadzi, ainzi Ridhiya, mutengesi wenguo dzepepuru muguta reTiatira, munamati waMwari, vakateerera. Uye Ishe akazarura mwoyo wake kuti vagamuchire zvinotaurwa naPauro achiti.
16:15 Zvino wakati abhabhatidzwa, neimba yake, iye akakumbira nesu, vachiti: "Kana uchinge wanditongera kuti ndakatendeka kuna Jehovha, pindai mumba mangu uye yekurara imomo. "Iye chokwadi isu.
16:16 Zvino zvakaitika kuti, pataipinda kuti munamato, mumwe musikana, vane mweya wekuuka, akasangana nesu. Akanga tsime purofiti zvikuru vatenzi vake, kuburikidza naye divining.
16:17 musikana uyu, kutevera Pauro nesu, akanga achidanidzira, vachiti: "Varume ava varanda vaMwari Wokumusoro-soro! Vari kukuparidzirai nzira yoruponeso!"
16:18 Zvino vakaita saizvozvo mazuva mazhinji. asi Paul, vakashungurudzika, akatendeuka akati kumweya, "Ndinokurayira, muzita raJesu Kristu, kuenda kwaari. "Uye Vakaenda iyoyo.
16:19 Asi vatenzi vake, vachiona kuti tariro yavo mubereko vakaenda, icho Pauro naSirasi, uye vakauya navo kuvatongi panguva imba yedare.
16:20 Nokupa kuti vatongi, vakati: "Varume ava vari kukanganisa guta redu, sezvo ivo vaJudha.
16:21 Uye vari kuzivisa nzira izvo zvisiri pamutemo kwatiri kugamuchira kana kutevedza, sezvo tiri vaRoma. "
16:22 Zvino vanhu vakamhanya pamwe chete kuzorwa navo. Uye vatongi, achibvambura nguvo dzavo, vakavarayira kuti acharohwa tsvimbo.
16:23 Vakati akuvadzwa netyava mazhinji pamusoro pavo, vakavakanda mutirongo, achirayiridza ravarindi kuvarinda zvakanaka.
16:24 Uye sezvo akanga agamuchira kurongeka mhando iyi, iye muvira zvokunyaradza muchitokisi, uye munotinyima tsoka dzavo mumatanda.
16:25 ndokubva, pakati pousiku, Pauro naSirasi vakanga vachinyengetera vachirumbidza Mwari. Uye avo vari muchitokisi vakanga vakavateerera.
16:26 Asi zvechokwadi, paiva pakarepo nokudengenyeka, zvikuru zvokuti nheyo dzetorongo hwakazununguswa. Uye pakarepo zvose masuo akavhurika, uye zvisungo vose vakasunungurwa.
16:27 Ipapo murindi wetirongo, ndapera vakavhiringika pfungwa vakamuka, achiona mikova yetirongo yakazaruka, akavhomora munondo wake uye akada kuzviuraya, akafunga kuti vasungwa vakanga vatiza.
16:28 Asi Pauro akadanidzira nenzwi guru, vachiti: "Ita hapana zvakaipa pachako, nokuti tiri muno tose!"
16:29 Zvadaro kudana nokuda chiedza, akapinda. nokudedera, akawira pamberi petsoka Pauro naSirasi.
16:30 Uye muchivarera panze, akati, "Vakuru, ndinofanira kuitei, kuti ndisunungurwe?"
16:31 Saka vakati, "Tenda munaShe Jesu, uye ipapo uchaponeswa, neimba yako. "
16:32 Uye vakataura Shoko raShe kwaari, pamwe navose vari mumba make.
16:33 Zvino, ndichivatakura muawa yousiku, akashambidza netyava dzavo. Uye akabhabhatidzwa, uye inotevera neimba yake yose.
16:34 Zvino wakati aenda navo mumba make, Akaisa tafura kwavari. Uye akanga unomufaro, pamwe neimba yake yose, vanotenda muna Mwari.
16:35 Zvino masikati yakanga yasvika, vatongi vakatuma nevashandi, vachiti, "Sunungura varume vaya."
16:36 Asi murindi wejeri akaudza Pauro mashoko iwayo: "Vatongi vatuma shoko kuti imi kusunungurwa. Naizvozvo ikozvino, enda. Enda norugare. "
16:37 Asi Pauro wakati kwavari: "Vakatipa vakarohwa pachena, kunyange isu havana mhosva. Vakakanda vanhu vaRoma mutirongo. Uye ikozvino vangadai kuzotidzinga kure chinyararire? kwete. pachinzvimbo, vauye mberi,
16:38 uye ngatiitei kuadzinga. "Ipapo vashandi mashoko iwayo. Uye pamusoro vachinzwa kuti vaiva vaRoma, vakatya.
16:39 uye kusvika, Ivo akavakumbira, uye achivatungamirira kunze, vakakumbira kuti vabve muguta.
16:40 Vakaenda kubva mujeri uye vakapinda mumba Lydia. Achiona hama, Ivo akavanyaradza, uye ipapo vakaenda.
MABASA AVAPOSTORI 17
17:1 Zvino vakati vachifamba kuburikidza Amfiporisi uye neAporonia, vakasvika kuTesaronika, paiva nesinagoge revaJudha.
17:2 Ipapo Pauro, maererano netsika, akapinda kwavari. Uye kwamaSabata matatu nharo navo pamusoro Magwaro,
17:3 nokududzira uye tagutsikana kuti zvakanga zvakakodzera kuti Kristu atambure uye kuti amuke zvakare kuvakafa, uye kuti "uyu ndiye Jesu Kristu, vandiri kukuparidzirai. "
17:4 Vamwe vavo vakatenda, uye vakanga vakabatana naPauro naSirasi, uye vazhinji ava kubva vanamati uye vahedheni, uye kwete vashoma vakanga vaine vakadzi.
17:5 Asi vaJudha, kuva godo, uye kubatana nedzimwe vezvakaipa pakati zvavo varume, akakonzera nyonganyonga, uye vakamutsa guta. Uye kushandisa chinzvimbo pedo neimba Jason, vakatsvaka ndivabudise kuvanhu.
17:6 Vakati vasina kudziwana, vakakakatira Jasoni nedzimwe hama kuvatongi veguta, vachidanidzira: "Nokuti izvi ndivo vanenge akamutsa guta. Vakasvika pano,
17:7 uye Jasoni akavagamuchira. Varume vose ivava vanoita zvinopesana nemirayiro yaKesari, vachiti kune mumwe mambo, Jesu. "
17:8 Ivo akakurudzira vanhu. Nevatongi veguta, pamusoro vachinzwa izvi,
17:9 agamuchira tsanangudzo kuna Jasoni nevamwe, akasunungura navo.
17:10 Asi zvechokwadi, hama dzakakurumidza akatuma Pauro naSirasi usiku kuBheriya. Vakati vasvika, vakapinda musinagoge revaJudha.
17:11 Asi izvi vakange vakanaka kukunda vaya vaiva muTesaronika. Vakagamuchira Shoko rose nechido, vachinzvera daily Magwaro kuti vaone kana zvinhu izvi zvakanga zvakadaro.
17:12 uye zvirokwazvo, vazhinji vakatenda pakati pavo, uyewo vasiri vashoma pakati vanokudzwa Marudzi varume nevakadzi.
17:13 ndokubva, apo vaJudha vokuTesaronika vakanga vakaziva kuti Shoko raMwari akaparidzirawo naPauro pana kuBheriya, vakaenda ikoko, vakasvikapowo vakamutsa kukanganisa vazhinji.
17:14 Zvino hama nokukurumidza akatuma Pauro kure, kuti kufamba nomugungwa. Asi Sirasi naTimoti vakasara imomo.
17:15 Zvino avo vakanga kutungamirira Pauro vakamusvitsa Atene. Agamuchira yakaronga kubva kwaari Sirasi naTimoti, kuti vauye kwaari pakarepo, vakasimuka.
17:16 Zvino Pauro akavamirira paAtene, mweya wake wakatambudzika mukati make, achiona guta rizere zvifananidzo.
17:17 uye saka, akanga nharo nevaJudha musinagoge, uye vanamati, uye munzvimbo, yose rimwe zuva, pamwe wakatsaurwa akanga aripo.
17:18 Zvino vamwe vazivi vaEpikuro vechiStoiki vakanga nharo naye. Uye vamwe vakanga vachiti, "Ko Mudyari ichi cheShoko kuda kutaura?"Asi vamwe vakati, "Anenge munhu mushamarari madhimoni zvitsva." Nokuti akanga muchizivisa kwavari Jesu uye Rumuko.
17:19 Uye apprehending iye, Vakamuuyisa kuAreyopago, vachiti: "Ko isu kukwanisa kuziva kuti dzidziso itsva iyi, dzaunotaura nezvadzo?
17:20 Nekuti unoreva zvimwe pfungwa itsva panzeve dzedu. Uye saka tinoda kuziva kuti zvinhu izvi zvinorevei. "
17:21 (Zvino vose vaAtene, uye achisvika Vashanyi, vakanga pokugara pachavo pamwe hapana mumwe pane kutaura kana kunzwa pfungwa itsva siyana.)
17:22 asi Paul, vakamira pakati peAreopago, akati: "Vanhu vomuAtene, Ndinoona kuti muzvinhu zvose muri nani mashura.
17:23 Nokuti sezvo ndakanga achipfuura uye vakacherechedza nezvifananidzo zvenyu, Ndakaonawo atari, zvakanga zvakanyorwa: KUNA MWARI USINGAZIKAMWI. saka, chii wamunonamata musingazivi, izvi ndizvo ndichiparidza kwamuri:
17:24 Mwari akasika nyika nezvose zviri mairi, Iye ndiye Ishe wedenga napasi, uyo haagari mutembere dzakaitwa nemaoko.
17:25 Kana kushumirwa nemaoko evanhu, sokunge anoshayiwa chinhu, sezvo ndiye unopa zvinhu zvose upenyu nokufema uye zvose.
17:26 Uye akaita, Mumwe, mhuri dzose munhu: kurarama pamusoro penyika yose, Pakusarudza yakatarwa uye miganhu yeugaro hwavo,
17:27 kuti vatsvake Mwari, kana zvimwe funga iye kana akamuwana, kunyange asiri kure neumwe neumwe wedu.
17:28 'Nokuti maari tinorarama, uye famba, uye tiripo. "Sezvo vamwe vanyanduri vekwenyu vakati. 'Nokuti tiri mhuri yake.'
17:29 saka, sezvo tiri mhuri yaMwari, hatifaniri kufunga goridhe kana sirivha kana mabwe anokosha, kana sokunyorwa Ndimi uye yokufungidzira wemunhu, kuva kumiririrwa zvinhu Divine.
17:30 uye zvirokwazvo, Mwari, ndokutarira pasi kuona kusaziva dzino, zvino vakazivisa varume vose kose zvinofanira kuita sakaremende.
17:31 Nokuti iye akagadza zuva raachatonga nyika noumhizha, kuburikidza munhu waakagadza, kupa kutenda zvose, nokumumutsa kubva kuvakafa. "
17:32 Vakati vanzwa pamusoro kwevakafa, chaizvo, vamwe vakanga derisive, vamwe vakati, "Tichateerera here nezvazvo zvakare."
17:33 Saka Pauro akabva pavo.
17:34 Asi zvechokwadi, vamwe varume, Kuomerera kwaari, havana kutenda. Pakati izvi vaivawo Dhionisio, muAreopago, uye mukadzi ainzi Dhamarisi, uye navamwewo.
MABASA AVAPOSTORI 18
18:1 Shure kwezvinhu izvi, akabva paAtene, akasvika Korinde.
18:2 Uye pamusoro akawana umwe muJudha wainzi Akwira, akaberekerwa muPontasi, akanga achangobva vachibva Italy pamwe Priscilla wake, (nokuti Kiraudhio akanga arayira kuti vaJudha vose vabve Roma,) akasangana navo.
18:3 Uye nekuti akanga ari mugadziri wamatende saivo, wakavatapo navo uye akanga achishanda. (Zvino vaiva vagadziri vematende matende.)
18:4 Uye akanga nharo musinagoge nomusi weSabata ose, kudzidzisa muzita raIshe Jesu. Uye akanga kugombedzera vaJudha navaGiriki.
18:5 Zvino Sirasi naTimotio akanga vachibva kuMasedhonia, Paul vakamira vakasimba muShoko, achipupurira kuvaJudha kuti Jesu ndiye Kristu.
18:6 Asi sezvo vakanga vachipikisa uye vachinyomba, akazunza nguo dzake asingafari akati kwavari: "Ropa renyu pamisoro yenyu. Ini ndakachena. Kubva zvino, Ini ndichaenda kuvaHedheni. "
18:7 Uye kutamira kubva panzvimbo, akapinda mumba mumwe murume, ainzi Titus iri Just, munamati waMwari, ane imba yakanga adjoined kusinagogi.
18:8 Now Krispo, mutungamiriri wesinagoge, vakatenda muna Ishe, neimba yake yose. Uye vazhinji vavaKorinde, pamusoro kunzwa, vakatenda uye vakabhabhatidzwa.
18:9 Zvino Jehovha akati kuna Pauro, kuburikidza dzengerere usiku: "Usatya. pachinzvimbo, taura uye usanyarara.
18:10 Nokuti ndinewe. Uye hakuna achakutorerai zvinokubatai, kuti kuita zvakaipa. Nokuti vazhinji muguta rino muneni. "
18:11 Akabva akagaramo kwegore nemwedzi mitanhatu, kudzidzisa Shoko raMwari pakati pavo.
18:12 Zvino Gario wakati ava mubati weAkaya, vaJudha vakasimuka nomwoyo mumwe kundorwa Paul. Uye vakauya naye kuna chekutonga,
18:13 vachiti, "Iye unogombedzera vanhu kunamata Mwari zvinopesana nemurairo."
18:14 ndokubva, apo Pauro kutanga kushamisa muromo wake, Gario akati kuvaJudha: "Kana izvi vamwe nyaya kusaruramisira, kana akaipa chiito, O vaJudha vanokudzwa, Ndinoda kukutsigira, sezvo kwakakodzera.
18:15 Asi kana zvechokwadi izvi mibvunzo pamusoro shoko uye mazita uye mutemo wenyu, unofanira zvionerei pachenyu. Ini handidi kutonga nyaya dzakadai. "
18:16 Zvino akavaraira kubva chekutonga.
18:17 asi ivo, apprehending Sositenesi, mutungamiriri wesinagoge, vakamurova pamberi pechigaro chokutonga. Uye Gario haana kuva nehanya izvi.
18:18 Asi zvechokwadi, Paul, mushure mokunge akaramba mamwe mazuva mazhinji, ndine akati akaonekana navo kuhama, Siria nechikepe, vakanga vanaye vaiva Prisira naAkwira. Zvino akanga akaveura musoro paKenikirea, nekuti akanga aita mhiko.
18:19 Zvino wakasvika Efeso, uye akavasiya shure ikoko. Asi zvechokwadi, iye pachake, vachipinda musinagogi, nharo nevaJudha.
18:20 ndokubva, kunyange vakanga vachimukumbira kuti agare kwenguva refu, haana kubvumirana.
18:21 pachinzvimbo, vachiti akaonekana navo uye kuvaudza, "Ndichadzokazve kwamuri, Mwari unoda,"Akabva paEfeso.
18:22 Uye pashure kuburukira kuKesariya, akakwira kuJerusarema, uye iye akakwazisa Church ikoko, uye ipapo akaburuka kuAndiyoki.
18:23 Wakati ambopedza nguva yakareba ikoko, akaisa ruoko, uye akafamba kuitira kuburikidza yeGaratiya uye veFrigia, achisimbisa vadzidzi vose.
18:24 Zvino mumwe muJudha ainzi Apollo, muArekisandira nekuzvarwa, murume nyanzvi yekutaura akanga simba Magwaro, akasvika paEfeso.
18:25 Akanga akadzidziswa nzira yaShe. Waishingaira mumweya, akanga achitaura uye vachidzidzisa zvinhu Jesu, asi achiziva chete rubhabhatidzo rwaJohwani.
18:26 uye saka, akatanga kuita nokutendeka musinagogi. Zvino Prisira naAkwira vakati vanzwa iye, vakamutora parutivi uye vakatsanangura Nzira yaIshe kwaari zvakawanda kwazvo.
18:27 ndokubva, sezvo aida kuenda kuAkaya, hama akanyora kurudziro vadzidzi, saka kuti amugamuchire. Zvino wakati asvika, achisimudzira kukurukurirana vazhinji vaya vakanga vatenda.
18:28 Nokuti akanga zvakasimba uye pachena anotsiura vaJudha, nekuzivisa kuburikidza neMagwaro kuti Jesu ndiye Kristu.
MABASA AVAPOSTORI 19
19:1 Zvino kuti, apo Apollo ari muKorinde, Paul, mushure akafamba okumusoro nharaunda, akasvika paEfeso. Uye akasangana nevamwe vadzidzi.
19:2 Akati kwavari, "After muchitenda, Iwe nokugamuchira Mweya Mutsvene?"Asi vakati kwaari, "Hatina kutongonzwa kuti kune Mweya Mutsvene."
19:3 Asi zvechokwadi, akati, "Zvadaro chii iwe vabhabhatidzwa?"Vakati, "With Rubhabhatidzo rwaJohwani."
19:4 Ipapo Pauro akati: "Johani akabhabhatidza vanhu rubhabhatidzo rwekutendeuka, vachiti vanofanira kutenda Uyo anouya shure, ndiko, muna Jesu. "
19:5 Paakanzwa izvi, vakabhabhatidzwa muzita raIshe Jesu.
19:6 Zvino Pauro wakati vakaisa maoko ake pamusoro pavo, Mweya Mutsvene akauya pamusoro pavo. Uye vakanga vachitaura nendimi uye kuprofita.
19:7 Zvino varume vanenge gumi navaviri vose.
19:8 ndokubva, pamusoro vachipinda musinagogi, akanga achitaura nokutendeka kwemwedzi mitatu, achikakavadzana uye akavakumbirisa nezvoumambo hwaMwari.
19:9 Asi kana vamwe vakava mikukutu uye havana kutenda, vanokutuka Nzira yaIshe pamberi pechaunga, Paul, pavaiva, akatsaura vadzidzi, nharo zuva nezuva rimwe yechikoro chaTirano.
19:10 Zvino izvi zvakaitwa kusvikira makore maviri, zvekuti vose vakange vagere paAsia akateerera Shoko raShe, vaJudha neVemamwe Marudzi.
19:11 Uye Mwari achiita simba uye sawanikwa zvishamiso noruoko Paul,
19:12 zvokuti kunyange apo machira maduku uye micheka zvaibva pamuviri wake vanorwara, ivo zvirwere akabva kwavari uye midzimu yakaipa vakaenda.
19:13 ndokubva, kunyange vamwe vatariri vadzingi vemweya yakaipa vechiJudha vaedza kudana zita raIshe Jesu pamusoro paavo vaiva nemidzimu yakaipa, vachiti, "Ini kusunga iwe nemhiko kuburikidza naJesu, unoparidzwa naPauro. "
19:14 Zvino kwaiva nevamwe vaJudha, vanakomana vanomwe vaSkevha, Vatungamiriri pavapristi, vakanga vachiita nenzira iyi.
19:15 Asi mweya wakaipa akapindura akati kwavari: "Jesu ndinomuziva, naPauro ndinoziva. Asi ndiwe?"
19:16 Murume, maari maiva mweya wakaipa, achisvetukasvetuka kwavari uye kuwana nani kwavari vose, akavakunda, zvekuti vakatiza mumba kuti, kupfeka uye vakuvadzwa.
19:17 uye saka, izvi zvikazikamwa kune vose vaJudha uye veMamwe Marudzi vaigara muEfeso. Uye kutya kukavawira pamusoro pavo vose. Uye zita raIshe Jesu rikakudzwa.
19:18 Uye vatendi vazhinji vakanga vachinonoka, vachireurura, uye kuzivisa mabasa avo.
19:19 Zvino vazhinji vakanga vakatevera shamisa tumapoka akaunganidza mabhuku avo, uye ivo vakaapisa pamberi zvose. Uye pashure Pakusarudza kukosha izvi, vakawana mutengo kuti madhinari zviuru makumi mashanu.
19:20 Nenzira iyi, Shoko raMwari rakanga kuwedzera zvakasimba uye akanga nekusimbiswa.
19:21 ndokubva, kana izvi zvakati zvapera, Pauro akasarudza muMweya, pashure pokuyambuka nepaMakedhonia neAkaya, kuenda kuJerusarema, vachiti, "Ipapo, mushure ndaivapo, zvakafanira kuti ini kuona Roma. "
19:22 Asi kutumira vaviri vaya vachimushandira, Timothy uye naErasto, kuMakedhoniya, iye pachake akaramba kwenguva muna Asia.
19:23 Zvino nenguva iyoyo, kwakanga kusina nenyonganyonga pamusoro penzira yaJehovha.
19:24 Nokuti mumwe murume ainzi Dhemetriyo, mupfuri wesirivheri kuita zvaDhiana zvesirivheri Diana, aipa diki hwakaisvonaka kuna mhizha.
19:25 Uye akadanira pamwechete, nevaya vaiita basa zvakafanana, akati: "Men, munoziva kuti kwedu mari kubva nebasa iri.
19:26 Uye imi muri kuona uye kunzwa kuti uyu murume Paul, kubudikidza nokunyengetedza, Adzinga vazhinji, kwete chete kubva kuEfeso, asi kubva anenge ose Asia, vachiti, 'Zvinhu havasi vanamwari akaitwa nemaoko.'
19:27 saka, kwete chete izvi, kwedu basa, mungozi kupinzwa kuramba, asiwo temberi mukuru Diana chichange sapasina! Zvadaro kunyange wake noumambo, uyo vose Asia uye nyika waanonamata, vachatanga kuti aparadzwe. "
19:28 Vachinzwa izvi, vakazadzwa hasha, uye vakadanidzira, vachiti, "Mukuru ndiye Diana wevaEfeso!"
19:29 Guta uzere nenyonganyonga. Uye vakabata Gayo naArisitako dzeMakedhonia, shamwari Paul, Vakamhanyira nechisimba, nemoyo umwe, muimba yemitambo.
19:30 ndokubva, kana Pauro akada kupinda kuvanhu, vadzidzi havana kumubvumira.
19:31 Uye vamwe vatungamiriri Asia, vaiva shamwari dzake, akatuma kwaari, vachikumbira kuti haana kuzviratidza ari dzemitambo.
19:32 Asi vamwe vakanga vachishevedzera zvinhu zvakasiyana-siyana. Nokuti ungano yakanga yakanyongana, uye vazhinji havana kuziva chikonzero vakanga vakaungana.
19:33 Saka vakakwevera Alexander kubva muchaunga, apo vaJudha vakanga propelling naye mberi. And Alexander, gesturing noruoko rwake kuti runyararo, aida kupa vanhu tsanangudzo.
19:34 Asi pavanenge vangorinzwa vakaziva kuti muJudha, vose vakadanidzira pamwe chete, kwemaawa anenge maviri, vakanga vachishevedzera, "Mukuru ndiye Diana wevaEfeso!"
19:35 Zvino munyori wakati vakanyaradza zvaunga, akati: "Varume veEfeso, zvino chii munhu asingazivi kuti guta reEfeso ndiro riri basa guru Diana uye wevana Jupiter?
19:36 saka, sezvo izvi havagoni kuti aipesana, zvakafanira kuti kudzikama uye kuita chinhu nekumhanyirira.
19:37 Nekuti mauya mberi varume ava, vasiri sacrilegious kana vanomhura pamusoro vamwarikadzi wenyu.
19:38 Asi kana Dhemetrio nemhizha vaanavo mhosva munhu, vanogona sheedzera pavazhe, uye pane proconsuls. Ngavarumbidze mhosva imwe.
19:39 Asi kana imi aibvunza pamusoro pezvimwe, izvi zvinogona kusarudzwa pakuungana kuri pamutemo.
19:40 Nokuti ikozvino tiri nokusvitsa munopwiswa bongozozo pamusoro zviitiko yanhasi, sezvo hakuna mhosva (aniko tinokwanisa kupa uchapupu) ari kuunganidzwa ichi. "Akati ataura izvi, akaendesa ungano.
MABASA AVAPOSTORI 20
20:1 ndokubva, pashure Mhirizhonga ikanyarara, Paul, akadana vadzidzi pachake vachivakurudzira, aonekana. Uye akaisa panze, kuti aende Makedhonia.
20:2 Zvino wakati achifamba kuburikidza idzodzo uye vakanga akavakurudzira pamwe mumharidzo zhinji, akapinda Greece.
20:3 Pashure pokunge apedza mwedzi mitatu imomo, treacheries akanga akaronga kumuitira nevaJudha, sezvo akanga oda kukwira chikepe Siria. Uye vakati achaudzwa ichi, iye kudzokera nokuMakedhoniya.
20:4 Zvino nevaya vaimuperekedza vakanga naSopata, mwanakomana Pyrrhus vachibva kuBheriya; uyewo vaTesaronika, Uye chechipiri Arisitako; naGayo weDhebhe, uye Timothy; uye Tikiko naTirofimo vaibva Asia.
20:5 izvi, mushure mekunge vaenda mberi, vakamirira isu paTroasi.
20:6 Asi zvechokwadi, isu takabva Firipi nechikepe, mushure memazuva ezvingwa zvisina mbiriso, uye mumazuva mashanu takaenda kwavari paTroasi, patakagara mazuva manomwe.
20:7 ndokubva, nesabata rokutanga, apo takanga vakaungana kumedura chingwa, Pauro akaparidza kwavari, takananga kusimuka rakatevera. Asi iye achiwedzerwa mharidzo yake pakati pousiku.
20:8 Zvino kwakanga zvakawanda mwenje muimba yepamusoro, apo isu vakaungana.
20:9 Zvino mumwe kuyaruka anonzi Yutiko, agere hwindo sill, yakanga kuremerwa rinorema hope (nokuti Pauro akanga achiparidza ari urefu). ndokubva, sezvo akaenda kunorara, akawira kubva yechitatu pauriri mukamuri pasi. Zvino wakati kusimudzwa, akanga akafa.
20:10 Apo Pauro akanga aenda pasi pake, akaisa pachake pamusoro pake uye, akarimbundikira, akati, "Usanetseka, nokuti mweya wake uchiri maari. "
20:11 uye saka, kukwira, uye vaimedura chingwa, uye vachidya, uye wakati ataura zvakanaka kusvikira kwaedza, akabva akaronga.
20:12 Zvino vakanga Vakauya nemukomana ari mupenyu, uye ivo vaipfuura zvishoma tinonyaradzwa.
20:13 Zvadaro takakwira nechikepe kuenda kuAsosi, apo takanga tichiwana Paul. Nokuti iye pachake akanga asarudza, sezvo akanga achiita rwendo netsoka.
20:14 Zvino wakati akabatana nesu paAso, isu akamutora, uye takaenda Mitirene.
20:15 Tikabva ipapo, zuva rakatevera, takasvika pakatarisana neKiyo. Uye akatevera takasvika Samosi. Uye zuva rakatevera takaenda paMireto.
20:16 Nokuti Pauro akanga asarudza kufamba nechikepe apfuura kuEfeso, kuitira kuti arege kunonoka paAsia. Nokuti akanga kumhanyira kuitira kuti, kana zvaibvira kwaari, aigona kuchengeta zuva rePendekosita paJerusarema.
20:17 ndokubva, kutuma ari paMireto kuEfeso, akadana avo mukuru pakuzvarwa mukereke.
20:18 Vakati vasvika kwaari uye vaiva pamwe chete, akati kwavari: "Munoziva kuti kubvira pazuva rokutanga kana Ndapinda Asia, Ndave ndinemi, yose nguva, saizvozvi:
20:19 ndichibatira Ishe, nekuzvininipisa kose uye pasinei misodzi uye nemiedzo iyo yakandiwira kubva treacheries vavaJudha,
20:20 sei I wakadzivisa chinhu zvaikosha, sei zvakanaka ndakaparidza kwamuri, uye kuti ndakakudzidzisai pachena uye dzimba,
20:21 kwazvo zvose kuvaJudha kuvaHedheni pamusoro pokupfidza kuna Mwari nokutenda munaShe wedu Jesu Kristu.
20:22 Saka zvino, tarira, kuitwa vanosungirwa mumweya, Ndinoenda kuJerusarema, ndisingazivi zvichandiwira ikoko,
20:23 asi kuti Mweya Mutsvene, nemuguta ose, akandipa Akanyevera, achiti kuti ngetani uye nenhamo pangu paJerusarema.
20:24 Asi ini kutyisa cheizvozvo. Handine funga upenyu hwangu kuti zvikuru nokuti angu, inopiwa kuti mune dzimwe nzira ndizive kupedza pachake rangu uye kuti ushumiri Shoko, randakapiwa naIshe Jesu, kuti ndizopupurira Gospel yenyasha dzaMwari.
20:25 Saka zvino, tarira, Ndinoziva kuti imi havazorwarizve chiso changu, mose pakati wandakasika vaifamba, achiparidza ushe hwaMwari.
20:26 Nechikonzero ichi, Ndinodana kwamuri sezvapupu pazuva irori: kuti ndakachena paropa zvose.
20:27 Nokuti handina kutsauka muduku kubva yokuzivisa zano rose raMwari kwamuri.
20:28 Chengetedza imi makwai yose, pamusoro izvo noMweya Mutsvene yakamira muri maBhishopu kutonga Church yaMwari, kwaakashandisa yakatengwa neropa rake.
20:29 Ndinoziva kuti pashure yekubva kwangu mhumhi dzinoparadza achapinda pakati penyu, asingaregi boka.
20:30 Uye pakati penyu, Varume muchamuka, anotaura zvinhu zvakatsauka kuti anyengere vadzidzi vavatevere.
20:31 Nokuda kwaizvozvi, kusvinurira, ukaramba itai kuti mumakore matatu handina kumborega, usiku nemasikati, nemisodzi, akurudzire mumwe nomumwe wenyu.
20:32 Saka zvino, Ndinoisa kuti Mwari uye kuShoko nyasha dzake. Ane simba kuvaka, uye kupa nhaka vose vatsvene.
20:33 Handina kuchiva kana sirivha nendarama, kana nguvo,
20:34 sezvamunozivawo imwi mumene. Nokuti chaidiwa neni uye nevaya vari neni, Maoko aya zvakapa.
20:35 Ndakakuzivisai zvinhu zvose kwamuri, nokuti nesimba saizvozvi, zvakafanira kutsigira simba nekurangarira mashoko aIshe Jesu, sei akati, 'Kwakaropafadzwa kupa kupfuura kugamuchira.' "
20:36 Zvino wakati areva zvinhu izvi, akapfugama, akanyengetera navo vose.
20:37 Zvadaro misodzi kukuru kwakaitika pakati pavo vose. uye, akawira pamutsipa waPauro, Ivo ndokumutsvoda,
20:38 vakashungurudzika zvikuru zvose pamusoro neshoko raakataura, chavaisazombofa chiso chake zvakare. Uye vakauya naye kuna chikepe.
MABASA AVAPOSTORI 21
21:1 Uye pashure pezvinhu izvi zvaitika, sezvo nyongoroka taparadzana navo, tikapfuura nechikepe zvakananga kosi, Pavakasvika Kosi, uye tichitevera zuva pa Rhodes, uye tikasvika Patara.
21:2 Takati tawana chikepe kuyambuka kuFonisia, achikwira chikepe, tikaenda nechikepe.
21:3 ndokubva, pashure takanga paakaona Cyprus, vachirichengeta kuruboshwe, isu nechikepe takananga kuSiriya, uye takasvika Tire. Nokuti chikepe chaienda kutura zvazvakatakura ikoko.
21:4 ndokubva, takati tawana vadzidzi, isu vakavatapo kwemazuva manomwe. Uye vakanga vachiti Paul, kuburikidza neMweya, kuti arege kukwira kuJerusarema.
21:5 Zvino mazuva apera, mamiriro, isu taenda; uye vose pamwe nesu pamwe nemadzimai avo nevana, kusvikira taiva kunze kweguta. Uye isu wakafugama pamahombekombe uye akanyengetera.
21:6 Zvino takanga aonekana mumwe nomumwe, takakwira muchikepe. Uye vakadzokera kwavo.
21:7 Asi zvechokwadi, apedza yedu rwendo nechikepe kubva Tire, isu akaburuka Pitoremai. Uye nokukwazisa hama, isu Vaigarapo navo zuva rimwe.
21:8 ndokubva, pashure rwatanga rakatevera, isu yasvika kuKesariya. Uye pamusoro tikapinda mumba maFiripi muevhangeri, uyo aiva mumwe wevanomwe, tikagara naye.
21:9 Zvino murume uyu aiva nevanasikana vana, mhandara, vaiprofita.
21:10 Uye patakanga kunonoka kwemazuva, mumwe muporofita kubva kuJudhiya, ainzi Agabhusi, akasvika.
21:11 Zvino, wakati asvika kwatiri, akatora bhandi raPauro, uye anosunga makumbo ake nemaoko, akati: "Zvanzi Mutsvene: Murume ane bhandi uyu, VaJudha vachasunga saizvozvo paJerusarema. Uye Vachamukumikidza mumaoko avahedheni. "
21:12 Zvino takati tichinzwa zvinhu izvi, isu nevaya vaiva munzvimbo iyo tikamukumbirisa kuti arege kukwira kuJerusarema.
21:13 Paul Zvino akapindura akati: "Ko iwe kuita muchisvimha misodzi uye kutambudza mwoyo wangu? Nokuti ndiri kugadzirira, kwete kusungwa chete, asi kufawo muJerusarema, nokuda kwezita raIshe Jesu. "
21:14 Uye sezvo taiva vasingagoni kumunyengetedza, isu vakanyaradza, vachiti: "Dai kuda kwaIshe ngakuitwe."
21:15 ndokubva, pashure pemazuva iwayo, kuva vagadzirira, isu akakwira kuJerusarema.
21:16 Zvino vamwe vadzidzi veKesariya vakaenda nesu, vachiuya navo mumwe Cypriot ainzi naMinasoni, mudzidzi akwegura kwazvo, vane vaeni taizova.
21:17 Takati tasvika paJerusarema, hama dzakatigamuchira nokuzvidira.
21:18 ndokubva, zuva rakatevera, Pauro akapinda nesu kuna Jakobho. Uye vakuru vose vakaungana.
21:19 Zvino wakati akavakwazisa, akatsanangura mumwe chinhu kuti Mwari tapedzapo pakati pavaHedheni kubudikidza noushumuri hwake.
21:20 ivo, pamusoro kuinzwa, akakudza Mwari akati kwaari: "You kunzwisisa, hanzvadzi konama, kuti zvuru zvingani varipo pakati pevaJudha vanotenda, uye vose vanoshingairira murairo.
21:21 Zvino vakanzwa pamusoro pako, kuti uri kudzidzisa vaJudha ivavo vari pakati pevahedheni kuti mubve Mosesi, achivaudza kuti varege kudzingisa vana vavo, kana kuita maererano netsika.
21:22 Chii chinotevera? Vazhinji anofanira kuunganidzwa. Nekuti vachanzwa kuti wasvika.
21:23 saka, chinhu ichi kuti chatinokumbira kwamuri: Tine varume vana, vari pasi mhiko.
21:24 Tora izvi uye kutsvenesa pachako navo, uye inoda kuti vaveurwe misoro yavo. Zvino vose vachaziva kuti zvinhu zvavakanzwa pamusoro muri venhema, asi kuti iwe pachako kufamba maererano mutemo.
21:25 asi, pamusoro avo vahedheni vakatenda, takavanyorera pane mutongo kuti vazvidzore pane chii chave immolated kuzvifananidzo, uye neropa, uye kubva chii chave kutadza kufema, uye ufeve. "
21:26 Ipapo Pauro, akatora varume pazuva rakatevera, wakange anatswa navo, uye akapinda mutemberi, yokuzivisa muitiro mazuva ekunatswa, kusvikira chipo kuti kupiwa nokuda mumwe nomumwe wavo.
21:27 Asi kana mazuva manomwe kusvika kupera, VaJudha ivavo vakanga vaibva Asia, Vakati vamuona ari mutemberi, Vachikurudzirwa vose vanhu, uye vakaisa maoko pamusoro pake, vachidanidzira:
21:28 "Varume veIsraeri, batsira! Uyu ndiye munhu anodzidzisa, vose, pose pose, vanhu uye mutemo uye nenzvimbo ino. Uyezve, iye kunyange akauya Vemamwe Marudzi mutemberi, uye akaita chibharo nzvimbo iyi tsvene. "
21:29 (Nekuti vakange vamboona Trofimo, ane vokuEfeso, muguta pamwe naye, uye vakafunga kuti Pauro akanga auya naye mutemberi.)
21:30 Zvino guta rose rakanyonganiswa. Zvino zvakaitika kuti vanhu vakamhanyira pamwe. Uye apprehending Paul, Ivo vakamukwevera kunze kwetembere. Uye pakarepo masuo avharwa.
21:31 ndokubva, Pavakanga vachiedza kumuuraya, akaudzwa kuti wehondo pamusoro Boka: "Jerusarema All riri kuvhiringidzika."
21:32 uye saka, pakarepo achitora mauto uye vezana, iye rakamhanyira kwavari. Vakati vaona wamauto uye masoja, vakaguma kurova Pauro.
21:33 Ipapo wehondo, richiswedera pedyo, amubatawo uye akarayira kuti iye asungwe nemaketani maviri. Uye akanga kubvunza kuti aiva ani uye kuti akanga aitei.
21:34 Zvino vakanga vachishevedzera zvinhu zvakasiyana-siyana mukati revanhu. Uye sezvo akanga asingagoni kunzwisisa chinhu zvakajeka nokuda komubvumo, akarayira kuti apinzwe nhare.
21:35 Zvino wakati asvika ari masitepisi, zvakaitika kuti akanga akakwidzwa nemasoja, nokuda nokutyisidzirwa chisimba kubva kuvanhu.
21:36 Nokuti vazhinji vakanga vachitevera uye vachishevedzera, "Endai naye!"
21:37 Uye sezvo Pauro akanga kutanga iunzwe nhare, akati kumukuru wavarwi, "Zvinobvumirwa bvumidzwa kwandiri kutaura kwamuri?"Akati, "Munoziva Greek?
21:38 Naizvozvo, hauna muIjipita uyo mazuva ano asati akakurudzira kupandukira uye akaendesa murenje zvuru zvina mhondi?"
21:39 Asi Pauro akati kwaari: "Ndiri murume, zvirokwazvo muJudha, aibva kuTaso muKirikiya, mugari guta inozivikanwa. Saka I kukumbira iwe, ndibvumirei kuti nditaure nevanhu ava. "
21:40 Zvino wakati amutendera, Paul, akamira pamatanho, akaninira noruoko rwake kuvanhu. Uye kana vanyarara kwazvo kwakaitika, akataura kwavari nerurimi rwechiHebheru, vachiti:
MABASA AVAPOSTORI 22
22:1 "Hama Noble uye madzibaba, teererai tsananguro kuti ini zvino kupa kwauri. "
22:2 Vakati vanzwa achitaura navo nomutauro wechiHebheru, vakabayira mukuru kunyarara.
22:3 Akati: "Ini ndiri munhu muJudha, nekuzvarwa kuTasasi kuSirisia, asi vakarerwa guta rino parutivi pamakumbo aGamarieri, akadzidzisa maererano nechokwadi mutemo wamadzibaba, vanoshingairira murairo, sezvo mose Nemiwo nhasi.
22:4 Ndakatambudza Nzira iyi, kusvikira parufu, ndichisunga nekukumikidza mutirongo vose varume nevakadzi,
22:5 sezvo mukuru uye vose mukuru pakuzvarwa vanopupurira kwandiri. Agamuchira matsamba aibva kwavari hama, I Dhamasiko, saka kuti avatungamirire vakasungwa kubva ipapo kuenda kuJerusarema, saka kuti varangwe.
22:6 Asi zvakaitika kuti, sezvo ndakanga parwendo uye akanga kusvika muDhamasiko masikati, pakarepo kubva kudenga chiedza chikuru chikandipenyera kumativi ose.
22:7 Uye akawira pasi, Ndakanzwa inzwi richiti kwandiri, 'Sauro, Sauro, uri kunditambudzirei?'
22:8 And I akapindura, 'Ndiwe ani, tenzi?'Akati kwandiri, 'Ndini Jesu weNazareta, waunotambudza. '
22:9 Uye vakanga neni, chaizvo, akaona chiedza, asi havana kunzwa inzwi raiye akanga achitaura neni.
22:10 Ndakati, 'Ndoita sei, tenzi?'Zvino Jehovha akati kwandiri: 'Simukai, uye kuenda kuDhamasiko. uye ipapo, iwe anofanira kuudzwa zvose kuti unofanira kuita. '
22:11 Uye sezvo ndakanga ndisingagoni kuona, nokuda nokupenya kuti chiedza, I akatungamirirwa ruoko neshamwari dzangu, uye ndakaenda kuDhamasiko.
22:12 Mumwe Ananias, munhu maererano nomutemo, ndine uchapupu vose vaJudha vaigara ikoko,
22:13 kuswedera pedyo neni uye akamira pedyo, akati kwandiri, 'Hama Sauro, ona!'Uye iyoyo, Ndakatarisa pamusoro pake.
22:14 Asi iye akati: 'Mwari wamadzibaba edu kufanoziviswa iwe, kuitira kuti vasvike pakuziva kuda kwake uye aizoona Just One, uye vakaramba kunzwa inzwi remuromo wake.
22:15 Nokuti iwe uchava chapupu chake kuvanhu vose pamusoro zvinhu zvawaona nokunzwa.
22:16 Saka zvino, munodireiko kunonoka? Simukai, uye ubhabhatidzwe, usukwe zvivi zvako, kubudikidza kushandisa zita rake. '
22:17 Zvino zvakaitika kuti, ndadzokera kuJerusarema, uye ndichinyengetera ndiri mutemberi, mupfungwa ndivete wakauya pamusoro pangu,
22:18 uye ndikamuona achiti kwandiri: 'Chimbidza! Kurumidzai kubva kuJerusarema! Nokuti havangagamuchiri kupupura kwako pamusoro pangu. '
22:19 Ndakati: 'Ishe, vanoziva kuti ndiri kurova uye zvakapoteredza mujeri, kumarudzi musinagoge rimwe nerimwe, vaya vaitenda kwamuri.
22:20 Uye kana ropa Stefani chapupu yako zvayakadururwa, Ndakamira pedyo uye wakange achitenderana, uye Ndakatarisa pamusoro nguo vaya kumuuraya. '
22:21 Akati kwandiri, 'Budai. Nokuti ndiri kukutuma kure marudzi. ' "
22:22 Zvino vakanga vachimuteerera, kusvikira shoko iri, uye ipapo vakasimudza manzwi avo, vachiti: "Torai ichi mhando kubva panyika! Nokuti hakuna kukodzera kuti vararame!"
22:23 Vachiri vachidanidzira, vachimwaya parutivi nguo dzavo, uye achidzinga guruva mumhepo,
22:24 wavarwi akarayira kuti apinzwe nhare, uye kuti arohwe uye vakatambudzwa, kuti kuwana chikonzero kuti vakanga vachishevedzera saizvozvo pamusoro pake.
22:25 Uye vakati akamusunga anosungira, Pauro akati kumukuru wezana wakange amirepo pedyo naye, "Zviri pamutemo here kwamuri kurova netyava munhu ari muRoma uye asina mhosva?"
22:26 Vachinzwa izvi, wezana akaenda kumukuru wavarwi akandomuzivisa izvozvo kwaari, vachiti: "Chii chauri kuronga kuita? Nokuti murume uyu muRoma. "
22:27 Uye mutungamiriri wehondo, kusvika, akati kwaari: "Ndiudze. Uri muRoma?"Naizvozvo iye akati, "Ehe."
22:28 Uye mutungamiriri wehondo akapindura, "Ndakawana muRoma ichi yarasikirwa zvikuru." Uye Pauro akati, "Asi ini ndakaberekwa nahwo."
22:29 saka, vaya vakanga vachienda rokupisa naye, pakarepo vakabva kwaari. Wavarwi aitya saizvozvo, pashure akaona kuti akanga ari mugari weRoma, nokuti akanga amusunga.
22:30 Asi pazuva rakatevera, achida kuziva zvakawanda zvakanaka chikonzero chaiva chokuti akanga achipomerwa nevaJudha, akamusunungura, uye akarayira vapristi kuungana, pamwe yose kanzuru. uye, zvibereko Paul, akamumisa pakati pavo.
MABASA AVAPOSTORI 23
23:1 Ipapo Pauro, achitarisa takatarira padare, akati, "Hama Noble, Ndakataura nehana yose yakanaka pamberi paMwari, kunyange nanhasi. "
23:2 Zvino mupristi mukuru, Ananias, akarayira vaya vakanga vamire pedyo kuti vamurove muromo.
23:3 Ipapo Pauro akati kwaari: "Mwari anofanira akurovei, iwe madziro akadzururwa nevhu jena! Nokuti dai iwe ugere uye unditonge nemurairo, apo, zvinopesana nemurairo, iwe rayirai kuti ndirohwe?"
23:4 Uye vaya vakanga vamire pedyo vakati, "Uri kutaura zvakaipa pamusoro mupristi waMwari?"
23:5 Pauro akati: "Handina kuziva, hama, kuti ndiye mupristi mukuru. Nokuti zvakanyorwa: 'Usataura zvakaipa pamusoro mutungamiri wavanhu vako.' "
23:6 zvino Pauro, tichiziva kuti munhu boka vaiva vaSadhusi rimwe vaFarisi, akati ari kanzuru: "Hama Noble, Ini ndiri muFarisi, mwanakomana wevaFarisi! Zviri pamusoro petariro nokumuka kwavakafa kuti Ndiri kutongwa. "
23:7 Zvino wakati areva izvi, bongozozo yakaitika pakati pevaFarisi nevaSadhusi. Uye chaunga chikakamukana.
23:8 Nokuti vaSadhusi vanoti hapana kumuka kwevakafa, uye kunyange ngirozi, kana mweya. Asi vaFarisi vanobvuma zviri zviviri izvi.
23:9 Zvino kwakava nemheremhere huru. Vamwe vaFarisi, akasimuka, vachirwa, vachiti: "Hationi chinhu chakaipa nomurume uyu. Zvakadini kana mweya akataura naye, kana mutumwa?"
23:10 Uye sezvo mukuru nokuitirana aitwa, wavarwi, akatya kuti Pauro inogona kudambuka navo, akarayira varwi iyerere uye kumubata pakati pavo, amuise muimba yemauto.
23:11 ndokubva, usiku hwakatevera, Ishe akamira pedyo naye, akati: "Iva kuramba. Nokuti sezvawakapupura pamusoro pangu paJerusarema, saizvozvowo zvakafanira kuti kupupura kuRoma. "
23:12 Uye kana masikati asvika, vamwe vaJudha vakaungana uye vakazvisunga nemhiko, vachiti havangadyi kana kumwa kusvikira vavuraya Pauro.
23:13 Zvino paiva vanopfuura makumi mana vakanga vatora mhiko iyi pamwechete.
23:14 Uye vakaswedera vatungamiriri vapristi, uye vakuru, uye vakati: "Takapika isu nokupika, saka kuti ticharamba hatidyi chinhu, kusvikira taponda Pauro.
23:15 saka, nedare remakurukota, unofanira zvino kupa chiziviso kumukuru wavarwi, kuti vauye naye kwamuri, sokunge iwe aida kuona chimwe chinhu pamusoro pake. Asi asati achiriona, takaita kugadzirira kuti vamuuraye. "
23:16 Asi kana mwanakomana wehanzvadzi yaPauro akanzwa izvi, pamusoro unyengeri hwavo, akaenda akapinda munhare, uye akashuma kuna Paul.
23:17 And Paul, akadanira kwaari umwe wevakuru vezana, akati: "Tungamirira jaya iri kumukuru wechuru. Nokuti ane shoko raanoda kumuudza. "
23:18 uye zvirokwazvo, Iye akamutora, akaenda naye kumukuru wavarwi, uye akati, "Paul, musungwa, akakumbira kuti ndiuise jaya iri kwamuri, sezvo rine shoko rarinoda kutaura kwamuri. "
23:19 Ipapo wehondo, akamubata noruoko, akaenda naye vari voga, uye akamubvunza: "Chii chaunoda kundiudza?"
23:20 Akati: "VaJudha akasangana kukumbira kuti muburusire Pauro mangwana kuti kanzuru, sokunge vachirangana kumubvunza pamusoro zvimwewo.
23:21 asi zvirokwazvo, iwe unofanira kuvatenda, nokuti vaizova kumuvandira vanopfuura makumi mana varume pakati pavo, vaya vakazvisunga nokupika kusadya, kana kumwa, kusvikira vamuuraya. Uye vava kugadzirira, vachitarisira kuti ndizvo zvinotaura kwamuri. "
23:22 Zvino wavarwi akaendesa jaya, uchitirayiridza kuti arege kuudza munhu kuti akanga akazivisa zvinhu izvi kwaari.
23:23 ndokubva, akadanira vezana vaviri, akati kwavari: "Gadzirirai mauto mazana maviri, kuitira kuti vaende kusvikira Kesariya, uye vemabhiza makumi manomwe, uye mazana maviri vane mapfumo, nokuti awa rechitatu reusiku.
23:24 Uye kugadzirira mhuka dzinotakuriswa kutakura Paul, kuitira kuti omuendesa zvakanaka Ferikisi, mubati. "
23:25 Nokuti aitya, vaJudha vamubate uye vagomuuraya zvimwe, uye kuti pashure aizosungwa nhema, sokunge akanga pfumbamuromo. Uye saka akanyora tsamba ine zvinotevera:
23:26 "Kraudhiyo Risiyasi, gavhuna wacho makakurumbira, Felix: kwaziso.
23:27 uyu, ndine kusungwa nevaJudha uye oda kuurawa navo, I akanunura, nemashoko nemasoja, sezvo ndaiziva kuti iye muRoma.
23:28 Uye kuda kuziva chikonzero kuti akaramba kwaari, Ndikamuburusira kudare remakurukota avo.
23:29 Uye ndakazoona kuti waipomerwa pamusoro pemashoko emurairo wavo. Asi zvechokwadi, hapana chaakaita chakakodzera rufu kana kusungwa raiva mukati kupomera.
23:30 Zvino ndakati dzakapiwa akanaka vavandiri, zvavakanga vagadzira pamusoro pake, Ndikamutumira kwamuri, kuzivisa vapomeri vake, kuitira kuti ateterere zvavaipomerwa pamberi penyu. Chisarai. "
23:31 Naizvozvo mauto, kutora Pauro maererano mirairo, akamuisa Antipatri usiku.
23:32 Uye zuva rakatevera, kutumira vatasvi vemabhiza kuti vaende naye, vakadzokera kuimba yemauto.
23:33 Vakati vasvika Kesariya uye akanga vakakumikidza tsamba kumutungamiriri, vakaisawo Pauro pamberi pake.
23:34 Uye akanga averenga apo uye akanga abvunza izvo ndewedunhu, vachiziva kuti akanga achibva kuSirisia, akati:
23:35 "Ini achakunzwa, kana vapomeri vako vasvika. "Ipapo akarayira kuti achengetwe mumba memutungamiriri naHerodhi.
MABASA AVAPOSTORI 24
24:1 ndokubva, mushure memazuva mashanu, mupristi mukuru Ananiasi akaburuka navamwe vakuru uye mumwe Teturo, mutauri. Vakaenda kuna vakamhan'arira Pauro kumutungamiriri.
24:2 Zvino akadana Pauro, Teturo akatanga kumupomera mhosva, vachiti: "Ferikisi, sezvo tine rugare zvikuru kubudikidza newe, uye zvinhu zvakawanda zvinogona kugadziriswa neurongwa hwako,
24:3 tinobvuma ichi, nguva dzose uye kwose kwose, nemabasa zvokuvonga pazvose.
24:4 Asi ndirege kutaura panguva kukuru kureba, Ndinokukumbirai, ne ngoni dzenyu, kutiteerera muchidimbu.
24:5 Takawana murume uyu kuti hosha, kuti anoita nokumukira pakati pevaJudha vose munyika yose, uye kuva munyori bongozozo weboka ravaNazarini.
24:6 Uye iye kunyange anga achiedza kukanganisa temberi. Zvino amubatawo, taida kuti kumutonga nemurairo wedu.
24:7 asi Risiyasi, wavarwi, isu vachikurirwa nechisimba chikuru, inotambwa naye kure mumaoko edu,
24:8 vachirayira vapomeri vake kuti vauye kwamuri. kwavari, iwe pachako uchakwanisa, nokuda kutonga pamusoro zvose izvi, kunzwisisa chikonzero kuti isu kumupomera. "
24:9 Zvino vaJudha interjected, vachiti zvinhu izvi zvakadaro.
24:10 ndokubva, sezvo mubati wakati akaninira kuti ataure, Paul akapindura: "Kuziva kuti wanga ari mutongi kurudzi urwu kwemakore mazhinji, Ndichapa tsanangudzo pachangu ane mweya akatendeseka.
24:11 For, sezvo zvaungafungidzira, hazvina chete mazuva gumi nemaviri kubvira pandakakwira vakakwira kunonamata muJerusarema.
24:12 Havana kundiwana mutembere ndichiita nharo nomunhu, kana kukonzera dziite vanhu: kana mumasinagoge, kana muguta.
24:13 Uye havagoni kupa uchapupu kwamuri zvinhu zvavanondipomera ini pamusoro ikozvino.
24:14 Asi ndinobvuma izvi kwamuri, kuti maererano kuti yeboka, iyo yavanoti manyepo, saka itai ndinoshumira Mwari wangu uye naBaba, Vachifunga zvose zvakanyorwa muMutemo naVaprofita,
24:15 ndine tariro muna Mwari, iyo vamwe izvi pachavo kutarisira, kuti kuchava nokumuka ramangwana kwevakarurama nevasakarurama.
24:16 Uye ichi, Ini pachangu kuedza kuva nehana kuti achishayiwa chero mhosva kuna Mwari nekuvanhu.
24:17 ndokubva, pashure pemakore akawanda, Ndakaenda rudzi rwangu, kuunza zvipo uye nezvipiriso uye mhiko,
24:18 iyo I akanzwirwa yokuzvinatsa mutemberi: kana boka, kana mheremhere.
24:19 Asi vamwe vaJudha Asia ndivo vaifanira akazviratidza pamberi penyu neni vagondokwirira, kana vaiva nekupokana neni.
24:20 Kana regai ava pano vanoti kana vakawana mandiri chero zvakaipa, ndakamira pamberi pedare.
24:21 Nokuti apo akamira pakati pavo, Ndakataura kunze chete pamusoro peizvi imwe nyaya: pamusoro kwevakafa. Zviri pamusoro izvi kuti Ndiri kutongwa nhasi nemi. "
24:22 Ipapo Felix, pashure pokunge kuvazivi ruzivo zvikuru pamusoro peNzira iyi, akavadzivisa tichimirira, nokutaura, "Kana Risiyasi mutungamiriri wehondo yasvika, Ndichakupai achakuteerera. "
24:23 Akarayira mukuru wezana aimuchengeta, uye kutora zororo, uye kwete kuti kurambidza chero yake kubva vachimushandira.
24:24 ndokubva, pashure pemazuva, Felix, Pavakasvika nomudzimai wake Drusira aiva muJudha, akadana Pauro akamunzwa nezvokutenda muna Kristu Jesu.
24:25 Uye mushure akaparidza pamusoro nokururamisira uye dzakachena, uye pamusoro pokutongwa ramangwana, Felix rakanga richizununguka, uye iye akapindura: "Nokuti zvino, famba, asi vanoramba pasi murindi. ndokubva, panguva yakakodzera, Ndichaita danai iwe. "
24:26 Akanga zvakare achitarisira kuti mari chipiwe kwaari naPauro, uye nokuda kwaizvozvi, iye kazhinji amushevedza uye akataura naye.
24:27 ndokubva, kana makore maviri akanga apfuura, Ferikisi akatsiviwa ne Portius Festo. Uye kubva Felix aida kuratidza zvikuru nyasha vaJudha, akasiya Pauro shure ari musungwa.
MABASA AVAPOSTORI 25
25:1 uye saka, Festo wakati asvika mudunhu, pashure pemazuva matatu, akakwira kuJerusarema achibva Kesariya.
25:2 Navakuru vavapristi, uye avo wekutanga pakati pavaJudha, akaenda kwaari pamusoro Paul. Uye vakanga kukumbira kwaari,
25:3 vachikumbira nyasha pamusoro pake, kuitira kuti arayire kuti aunzwe kuJerusarema, mavakanga kuramba vanovandira kuti vamuuraye panzira.
25:4 Asi Festo akapindura kuti Pauro aifanira kuchengetwa muKesariya, uye kuti iye pachake aizokurumidza kuenda ikoko.
25:5 "Naizvozvo," akati, "Vaya pakati penyu vanokwanisa, buruka panguva imwecheteyo, uye kana paine mhosva munhu, varege kumupomera. "
25:6 ndokubva, Wakati agara pakati pavo hapana anopfuura masere kana gumi mazuva, akaburuka akaenda kuKesaria. Pazuva rakatevera, akagara pachigaro chokutonga, uye akarayira kuti Pauro aunzwe mu.
25:7 Zvino wakati arerwa, vaJudha vakanga vaburuka vachibva kuJerusarema vakamira vakamukomba, vachikandira kupomerwa zhinji zvakakomba, hapana vakakwanisa kuratidza.
25:8 Paul akapa kudzivirira ichi: "Kumurairo wevaJudha, kana temberi, kana Kesari, handina kutadza pamhaka. "
25:9 asi Festo, achida kuratidza nyasha zvikuru kuvaJudha, akapindura Pauro achiti: "Unoda kukwira kuJerusarema kunotongwa ikoko pamusoro pezvinhu izvi pamberi pangu?"
25:10 Asi Pauro akati: "Ini kumira ZvaKesari dare, riri pandinofanira kutongwa. Handina kuita chinhu chakaipa kuvaJudha, sezvo imi munoziva.
25:11 Nekuti kana ndakazvikudza kuvakuvadza, kana ndakaita chimwe chinhu chakakodzera rufu, Handisi kuramba kufa. Asi kana pasina chinhu izvi ivo ini mhosva pamusoro, Hakuna munhu unogona kundirwira kwavari. Ndinozvipfuuridzira kuna Kesari. "
25:12 Ipapo Festo, areva nedare remakurukota, akapindura: "Wazviisa kuna Kesari, kuna Kesari uchaenda. "
25:13 Zvino mamwe mazuva akati apfuura, Mambo Agripa naBhenisi akazoburuka kuKesariya, kukwazisa Festo.
25:14 Uye sezvo vakagarapo mazuva mazhinji, Festo akataura kuna mambo pamusoro Paul, vachiti: "Mumwe murume akanga asiya kuva musungwa naFerikisi.
25:15 Pandaiva paJerusarema, vakuru nevapristi vakuru vavaJudha vakauya kwandiri nezvake, vachikumbira mhosva pamusoro pake.
25:16 I akavapindura kuti haisi tsika yevaRoma mhosva munhu, asati ari achipomerwa kwave akavingwa vaimupomera uye akave nokugamuchira wokuzvidzivirira, kuti achenese pachake ari kupomerwa.
25:17 saka, vakati vasvika pano, handina kunonotsa, zuva rakatevera, agere pachigaro chokutonga, Ini akarayira murume auyiswe.
25:18 Asi kana vapomeri akanga akamira, havana kupa chero mhosva nezvake kubva ndaizorasikirwa chifungidziro zvakaipa.
25:19 pachinzvimbo, vakauyisa pamusoro pake kumwe kukakavadzana pamusoro echitendero chavo uye pamusoro pomumwe Jesu, vakanga vafa, asi uyo Pauro akaramba mupenyu.
25:20 saka, kuva nechokwadi kuti mubvunzo mhando iyi, Ndakamubvunza kana akanga achida kuenda Jerusasrema kunotongwa ikoko pamusoro pezvinhu izvi.
25:21 Asi sezvo Pauro hwaifadza ichengeterwe chisarudzo pamberi Agasto, Ndakarayira kuti achengetwe, kusvikira ini kuti kumutuma kuna Kesari. "
25:22 Ipapo Agripa akati kuna Festo: "Ini pachangu ndinoda kunzwa munhu." "Mangwana," akati, "Muchamunzwa."
25:23 Pazuva rakatevera, Agripa naBhenisi akanga akasvika ostentation kukuru uye apinda ichipinda pamwe tribunes nevakuru veguta, Pauro akaunzwa, paairayirwa Festus.
25:24 Fesitasi akati: "Mambo Agiripa, uye vose varipo pamwe nesu, munoona uyu, wandakakumbirwa nechaunga chevaJudha anetseka pangu paJerusarema, nokukumbira achishamatata kuti haafaniri kubvumirwa achirarama.
25:25 Zvirokwazvo, Ndaona nekutarisisa chinhu vakauya kuzorwa naye akakodzera rufu. Asi sezvo iye Kesari, zvakanga mutongo wangu kumutumira.
25:26 Asi handina kutsunga chii kunyorera mambo nezvake. Nokuda kwaizvozvi, Ndamuuyisa pamberi penyu mose, uye kunyanya pamberi penyu, Mambo Agripa, kuti, kamwe abvunze yauya, Ndive chinhu nechandinganyora.
25:27 Nekuti ndinoona sezvisina kufanira kutuma musungwa uye kwete kuratidza kupomera akaisa pamusoro pake. "
MABASA AVAPOSTORI 26
26:1 Asi zvechokwadi, Agripa akati kuna Pauro, "Zvinonzi Unotenderwa kuti kuzvidavirira." Saka Pauro, kukukoka, vakatanga kupa achizvidzivirira.
26:2 "Ini funga pachangu wakakomborerwa, Mambo Agripa, kuti ndiri kupa kuzvidavirira kwangu nhasi pamberi penyu, zvose zvandakamhan'arirwa nevaJudha,
26:3 kunyanya sezvo imi munoziva zvinhu zvose kuti chokuita nevaJudha, zvose tsika uye mibvunzo. Nokuda kwaizvozvi, Ndinokukumbirai kuti munditeerere nomwoyo murefu chaizvo.
26:4 uye zvechokwadi, vaJudha vose vanoziva pamusoro hwangu kubva pauduku hwangu, izvo rakatangwa pakati vokwangu muJerusarema.
26:5 Vaiziva ini tsime kubva pakutanga, (kana vaizova kuda kupa uchapupu) nokuti ndakararama maererano kupfuura vakatsunga yechitendero chedu: muFarisi.
26:6 Saka zvino, iri tariro Zvakavimbiswa naMwari kumadzibaba edu kuti ndimire pasi mutongo.
26:7 Ndicho Promise kuti edu gumi nemaviri, kunamata usiku nemasikati, tariro kuona. Nezvetariro iyi, O mambo, Ndinopiwa mhosva nevaJudha.
26:8 Seiko kutongwa saka risingadaviriki nemi mose kuti Mwari aigona kumutsa vakafa?
26:9 uye zvechokwadi, Ini pachangu kare vafunga kuti ndinofanira kuita nenzira dzakawanda idzo vari zvinopesana nezita raJesu weNazareta.
26:10 Izvi zvakare sei ndakazviita paJerusarema. uye saka, I wakakomberedzwa vanhu vazhinji mutsvene mujeri, ndagamuchira simba kubva vakuru vavapristi. Zvino vaifanira kuurayiwa, Randabudisa mutongo.
26:11 Zvino musinagoge ose, kazhinji apo kuvaranga, Ini kuti vanyombe. Uye wakati zvose zvikuru anopenga kuzorwa navo, I akatambudza kwavari, kusvikira kumaguta evahedheni.
26:12 zvapera izvozvo, sezvo ndakanga ndichienda kuDhamasiko, nesimba uye mvumo kubva mupristi mukuru,
26:13 masikati, O mambo, Ini uye vaya vaiva neni, akaona munzira chiedza chichibva kudenga rinopenya kumativi kwandiri norunako rukuru kupfuura zuva.
26:14 Zvino takati tose tawira pasi, Ndakanzwa izwi richitaura kwandiri richiti nerurimi rwechiHebheru: 'Sauro, Sauro, uri kunditambudzirei? Zvakaoma kuti ukave Chibayiso. '
26:15 Ipapo ndakati, 'Ndiwe ani, tenzi?'Zvino Jehovha akati, 'Ndini Jesu, waunotambudza.
26:16 Asi simuka umire netsoka dzako. Nokuti ini akazviratidza kwauri nechikonzero ichi: kuti ndisimbise uve mushumiri uye chapupu pamusoro zvinhu zvawaona, uye pamusoro pezvinhu yandichakuratidza kwamuri:
26:17 wokununura kuvanhu uye marudzi yandiri ikozvino kukutuma,
26:18 kuti usvinudze meso avo, saka kuti kutendeuka kubva murima, vaende kuchiedza, uye kubva pasimba raSatani kuna Mwari, kuitira kuti vagamuchire kuregererwa kwezvivi uye nzvimbo pakati vatsvene, kubudikidza nokutenda kuri mandiri. '
26:19 Kubva ipapo, Mambo Agripa, Handina vasingatendi chiratidzo chekudenga.
26:20 Asi Ndakaparidza, kutanga kune vari muDhamasiko uye paJerusarema, uye zvadaro kune yose yeJudhea, uye nokuvaHedheni, saka kuti vangatendeuka uye exchange kuna Mwari, kuita mabasa vakafanira kutendeuka.
26:21 Zvakanga nokuti ichi chikonzero kuti vaJudha, wakati mokumusunga kwandiri pandakanga ndiri mutemberi, yakaedza kundiuraya.
26:22 Asi wakati Ichibatsirwa naMwari, kusvikira nhasi, Ndinomira kupupurira vaduku nevakuru, vachiti chinhu zvinopfuura zvakataurwa navaprofita uye naMozisi akati zvaizova mune ramangwana:
26:23 kuti Kristu aizotambura, uye kuti aizova wokutanga kubva kwevakafa, uye kuti iye aizounza chiedza kuvanhu nekuvahedheni. "
26:24 Wakati achitaura zvinhu izvi nokuisa kuzvidavirira, Festo akati nenzwi guru: "Paul, muri penga! Yakawandisa kudzidza afunga kuti kupenga. "
26:25 Pauro akati: "Handisi penga, changamire Fesitasi, asi ndiri kutaura mashoko echokwadi uye kunyara nekuzvidzora.
26:26 Nokuti mambo vanoziva zvinhu izvi. Wakewo, Ndiri kutaura nguva dzose. Nokuti ndinofunga kuti hapana chimwe chezvinhu izvi vasingazivikanwi kwaari. Uye kunyange dzaiva izvi kuitwa pachikona.
26:27 Unotenda Vaprofita, Mambo Agripa? Ndinoziva kuti munotenda. "
26:28 Ipapo Agripa akati kuna Pauro, "Kusvika pamwero, imi Ungandinyengetedza kuva muKristu. "
26:29 Pauro akati, "Ndinovimba kuti Mwari kuti, zvose kadiki kumwero uye kumwero, kwete iwe chete, asiwo vaya vose vanondinzwa nhasi ichava sezvandinoita neniwo ndiri, asi kunze kwezvisungo izvi. "
26:30 Mambo akasimuka, uye mubati, naBhenisi, uye vaya vakanga vagere navo.
26:31 Vakati vabuda, vakanga vachitaura pachavo, vachiti, "Munhu uyu haana kuita chinhu chakafanira rufu, kana kusungwa. "
26:32 Ipapo Agripa akati kuna Festo, "Munhu uyu angadai asunungurwa, dai asina kuzvipfuuridza kuna Kesari. "
MABASA AVAPOSTORI 27
27:1 Zvadaro kwakasarudzwa kumutumira nengarava kuItaly, uye kuti Pauro, nevamwe muchitokisi, vangarwirwa wezana ainzi Julius, of boka Augusta.
27:2 Pashure achikwira akwira chikepe kubva kuAdramitiyumu, tikaenda nechikepe uye akatanga kufamba munzira zvengarava kweAsia, pamwe Arisitako, ari muMasedhonia aibva kuTesaronika, kubatana nesu.
27:3 Uye zuva rakatevera, takasvika paSidhoni. And Julius, kubata Paul humanely, huchibvumirwa kuti aende kushamwari dzake uye kutarisira pachake.
27:4 Takati nechikepe kubva ipapo, isu vaishandisa pazasi Cyprus, nekuti mhepo yaitipikisa.
27:5 Uye yokufambisa kunyange gungwa reKirikia, takasvika Ristra, riri muRisia.
27:6 Ipapo mukuru wezana akawana chikepe kubva cheAreksandira chaienda Itaria, iye isu kune izvozvo.
27:7 Zvino takati tananaira nechikepe mazuva mazhinji uye zvakanga haawanzotauri tikasvika pakatarisana Kinidho, nokuti mhepo yakanga isu mukuvhiringidza, isu nechikepe kweKirete, pedo Salmon.
27:8 Uye padikidiki kukwanisa nechikepe apfuura nayo, takasvika pane imwe nzvimbo, unonzi pokugara Good, tevere waiva neguta reRasea.
27:9 ndokubva, pashure nguva huru yakati yapfuura, uye sezvo kufamba nechikepe hawaizovazve akangwara nokuti Fast Day akanga zvino apfuura, Paul akavanyaradza,
27:10 uye akati kwavari: "Men, Ndinoona kuti rwendo yava pangozi yokukuvadzwa uye muchiwirirana, kwete chete kune nhumbi uye ngarava, asiwo hwedu. "
27:11 Asi mukuru wezana akaisa zvikuru kuvimba mukuru uye aidzidzisa chikepe, pane zvinhu zvichitaurwa naPauro.
27:12 Uye sezvo akanga asina kukodzera chengarava umo kuti chando, ruzhinji vaifunga nechikepe kubva ipapo, kuti zvimwe vave kukwanisa kusvika pa kuFenikiya, kuti chando ikoko, panguva chengarava muKrete, izvo anotarira kurutivi kumadokero uye kuchamhembe kwakadziva kumadokero.
27:13 Uye sezvo mhepo yezasi yakanga ichivhuvhuta zvinyoronyoro, vaifunga kuti izadzise chinangwa. Uye mushure vachibva Asson, vakayera zvibatiso pa Kirete.
27:14 Asi kwete nguva pashure, mhepo chisimba akauya kuzorwa navo, anonzi west Wind.
27:15 Uye kamwe chikepe akanga abatwa uye haana kukwanisa Munorwireiko mhepo, Kupa pamusoro chikepe kuti mhepo, isu nemhepo.
27:16 ndokubva, kumanikidzwa pamwe chimwe chitsuwa, anonzi Muswe, takanga padikidiki kukwanisa kuomerera kune muchikepe chokununura.
27:17 Kana ichi rokwidzwa, vakashandisa nayo kubatsira asunga chikepe. Nekuti vaitya kuti kumhanya hedu. Uye wakati kutura maseiri, vakanga marasirwa pamwe nenzira iyi.
27:18 ndokubva, sezvo takanga ichipeperetswa pamusoro zvakasimba nokuda dutu, zuva rakatevera, vakakanda anorema zvinhu mugungwa.
27:19 Uye pazuva retatu, nemaoko avo pachavo, vakakanda nhumbi muchikepe mugungwa.
27:20 ndokubva, Zuva kana nyeredzi pazvisina kuonekwa kwamazuva mazhinji, uye hapana magumo dutu rakanga rava pedyo, tariro zvose vakachengeteka yedu ikapera.
27:21 Uye vakati vapedza kutsanya kwenguva refu, Paul, amire pakati pavo, akati: "Zvechokwadi, varume, unofanira kunge kunditeerera uye haana kuisa kubva kuKrete, kuti kukonzera kutambudzika nekurashikirwa uku.
27:22 Saka zvino, regai kukugombedzerai kuti shinga mweya. Nokuti hakungavi nekurashikirwa neupenyu pakati penyu, asi chikepe.
27:23 Nokuti mutumwa waMwari, uyo basa neni uye wandinoshumira, akamira pedyo neni usiku huno,
27:24 vachiti: 'Usatya, Paul! Zvakafanira kuti mumire pamberi paKesari. uye tarira, Mwari akapa kwamuri navose vanofamba newe muchikepe. '
27:25 Nokuda kwaizvozvi, varume, shinga mweya. Nokuti ndinovimba Mwari kuti izvi zvichaitika saizvozvo kuti sokuudzwa kwandiri.
27:26 Asi zvakafanira kwatiri kuti tisvike chiwi. "
27:27 ndokubva, pashure usiku hwegumi akasvika, sezvo takanga yokufambisa mugungwa reAdriya, panenge pakati pousiku, vafambisi vechikepe vaitenda kuti vaona vamwe mugove wenyika.
27:28 Uye pamusoro anodonha kurema, vakawana kudzika maviri paces. Uye chinhambwe kubva ipapo, vakawana kudzika gumi paces.
27:29 ndokubva, dzinotya kuti isu chingaitika pamusoro ine nzvimbo, vakakanda zvimiso zvina neshure kwechikepe, uye vakanga vachitarisira kuti masikati kusvika nokukurumidza.
27:30 Asi zvechokwadi, vafambisi vechikepe vakanga vachitsvaka nzira kutiza muchikepe, nokuti vaburusira mumwe chokununura mugungwa, pamusoro chokumupomera kuti vakanga vachiedza vakakanda zvimiso nouta chikepe.
27:31 Saka Pauro akati kumukuru wezana nekumauto, "Kana varume ava vakasaramba vari muchikepe, hamungambovi kukwanisa vaponeswe. "
27:32 Ipapo mauto akagura mabote kusvika chokununura, uye akabvumira kuti kuwa.
27:33 Zvino akatanga kuva chiedza, Pauro akakumbira kuti vose kutora zvokudya, vachiti: "Iri ndiro zuva rechigumi nemana kuti wanga wakamirira uye kuramba kutsanya, kutora chinhu.
27:34 Nechikonzero ichi, Ndinokumbira kuti kugamuchira zvokudya nokuda utano hwako. Nokuti hapana kana bvudzi mumusoro vachaparara chero iwe. "
27:35 Zvino wakati areva zvinhu izvi, kutora chingwa, akavonga kuna Mwari pamberi pavo vose. Zvino wakati achimedura, akatanga kudya.
27:36 Ipapo vose vakava norugare mweya. Vakatorawo chikafu.
27:37 Zvirokwazvo, taiva mweya mazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu.
27:38 Uye ndapera noUshumiri chikafu, vakarerusa chikepe, vachikandira zviyo mugungwa.
27:39 Zvino zuva yakanga yasvika, havana kuziva nzvimbo. Asi zvechokwadi, ivo akaona imwe yakatetepa Inlet ane pamhenderekedzo, umo vaifunga zvinogona kumanikidza chikepe.
27:40 Vakati zvimiso, vakazviisa mugungwa, panguva iyoyowo muchisunungura kuzvidzora ari zvidzoreso. uye saka, kukwidza mainsail kuti gusting mhepo, Vakamanikidza vakananga kumhenderekedzo.
27:41 Uye kana isu zvakaitika pamusoro nzvimbo dzingashandwa makungwa maviri, ivo chikepe pasi. uye zvirokwazvo, uta, vari kuita chinhu, akaramba wakasimba, asi zvirokwazvo kumashure yakatyoka nesimba mugungwa.
27:42 Ipapo mauto vaiva chibvumirano kuti vauraye vasungwa, zvimwe munhu, pashure kutiza nokuda nokushambira, atizire.
27:43 Asi mukuru wezana, achida kuponesa Pauro, airambidzwa kubva kuitwa. Akarayira vaya vaigona kushambira kuti vashambire munzvimbo yokutanga, uye kutiza, uye kuti nyika.
27:44 Zvino vamwe, Vamwe vakaenda pamatanda, uye nevamwe zvinhu zvaiva mungarava. Saizvozvo zvakaitika kuti mweya yose akatizira kunyika.
MABASA AVAPOSTORI 28
28:1 Uye mushure vapona, zvino takaziva kuti chitsuwa chacho chainzi Marita. Asi zvechokwadi, venyika vaitipa hapana shoma humán kurapwa.
28:2 Nokuti isu tose uzorodzwe unobvira moto, nekuti mvura yakanga yava kuda uye nekuda kwechando.
28:3 Zvino Pauro wakati aunganidza pamwechete svinga manyoro, uye akanga vavamisa pamoto, nyoka, rakanga pedyo kupisa, yakanamatira kwacho rwake.
28:4 uye zvechokwadi, Zvino venyika iyo vakati vachiona chikara chakaremberera paruoko rwake, vakanga vachiti: "Zvechokwadi, Murume uyu anofanira kuva mhondi, nokuti kunyange apukunyuka gungwa, kutsiva Haazobvumiri kuti ararame. "
28:5 Asi kuzunza chisikwa mumoto, chaanoshopera asina kufa Migumisiro.
28:6 Asi ivo vakafunga kuti aizokurumidza hadzina kuzvimba, uye zvaizoita nokukurumidza pasi uye kufa. Asi wakati akamirira kwenguva refu, uye akasaona kurwara migumisiro maari, vakashanduka dzavo uye vakanga vachiti kuti aiva mwari.
28:7 Zvino pakati munzvimbo idzi dzakanga Estates muridzi ne mutongi chitsuwa, ainzi vaPubhirio. Zvino, kutiendesa mu, akatiratidza nomutsa mutsa mazuva matatu.
28:8 Zvino zvakaitika kuti baba vaPubhirio nefivha uye vane manyoka. Pauro akapinda kwaari, uye wakati akanyengetera uye akanga aisa maoko ake pamusoro pake, Akaponesa naye.
28:9 Zvino ichi zvaitwa, vose vaiva nezvirwere pachitsuwa pedyo uye vakaporeswa.
28:10 Uye ipapo ivowo isu akapa kukuru. Uye patakanga tagadzirira tikaenda, vakatipa chero zvataida.
28:11 uye saka, pashure pemwedzi mitatu, isu nechikepe muchikepe chaibva Arekizandriya, ainzi 'ari Castors,'Uye chakange chagara muchando ari pachitsuwa.
28:12 Takati tasvika kuSirakusi, takanga kunonoka ikoko kwemazuva matatu.
28:13 kubva ipapo, nechikepe pedyo kumhenderekedzo, takasvika Regiyumu. Zvino shure kwezuva rimwe, pamwe mhepo yezasi ichivhuvhuta, patakasvika pazuva rechipiri paPuteori.
28:14 There, pashure kutsvaga hama, takakumbirwa kuti vagare nadzo kwemazuva manomwe. Zvino isu taenda Roma.
28:15 uye ipapo, apo hama dzakanga dzanzwa nezvedu, vakaenda kundosangana nesu kusvikira Forum weApiyo ari Nhatu. Zvino Pauro aona navo, muchivonga Mwari, akashinga.
28:16 Takati tasvika kuRoma, Paul akapiwa mvumo kugara oga, aine murwi aimuchengeta.
28:17 Uye pashure nezuva retatu, akaunganidza vatungamiriri vevaJudha. Vakati kuunganidzwa, akati kwavari: "Hama Noble, Handina kuita chinhu chakaipa kuvanhu, kana tsika dzemadzibaba, asi ndakarwirwa kubva kuJerusarema ndiri musungwa ndakumikidzwa pamaoko evaRoma.
28:18 Uye pashure vakaita kunzwa pamusoro pangu, ini kunge vangadai kusunungurwa, nekuti pakange pasina mhosva yerufu kwandiri kuzorwa.
28:19 Asi vaJudha vakati vapikisana neni, Ndikarovererwa kuzvipfuudza kuna Kesari, kunyange haana kana ndaiva chero kupomera mhando pamusoro porudzi rwangu.
28:20 uye saka, nekuti izvi, I akakumbira kuti ndikuonei uye nditaure nemi. Nokuti nokuda kwetariro yaIsraeri yandiri vachiapoteredza pamwe chain. "
28:21 Asi vakati kwaari: "Hatina kugamuchira tsamba pamusoro pako kubva kuJudhiya, kana kuva chero mamwe vatsva pakati pehama atiudza kana kuti ataura chinhu chakaipa pamusoro pako.
28:22 Asi isu tiri kukumbira kunzwa mafungiro ako kubva kwauri, nokuti bato iri, tinoziva kuti ari kutaurwa pamusoro kwose kwose. "
28:23 Zvino vakati vavagadzira zuva naye, zhinji kwazvo vanhu vakaenda kwaari ake muenzi nepedyo. Zvino akaparidza, achipupurira umambo hwaMwari, uye akavakumbirisa nezvaJesu, kushandisa mutemo waMosesi neZvakanyorwa nevaprofita, kubva mangwanani kusvikira manheru.
28:24 Vamwe vakatenda zvinhu aiti, asi vamwe havana kutenda.
28:25 Zvino vakati vasingagoni pachavo, vakabva, apo Pauro aitaura shoko iri rimwe: "Mweya Mutsvene sei zvakanaka kutaura namadzibaba edu achishandisa muprofita Isaya,
28:26 vachiti: 'Enda kuvanhu ava uti kwavari: kunzwa, ugondonzwa uye vasinganzwisisi, uye achiona, uchaona musingaonesesi.
28:27 Nokuti mwoyo yevanhu ava yava mikukutu, uye havana kuteerera vasingadi nzeve, uye vakatsinzina meso avo zvakasimba, zvimwe vangaona nemeso, uye kunzwa nenzeve, uye kunzwisisa nemoyo, uye saka mudzoke, uye ndigovaporesa. '
28:28 saka, ngazvizikamwe kwamuri, kuti ruponeso rwaMwari rwunotumirwa kuvahedheni, uye vanofanira kukuteerera. "
28:29 Zvino wakati areva zvinhu izvi, vaJudha akabva kwaari, kunyange vakanga nemibvunzo yakawanda vachiri pakati pavo.
28:30 Ipapo akagara kwemakore yose makore maviri yake yaairipira lodgings. Uye akagamuchira vose vaipinda kwaari,
28:31 achiparidza ushe hwaMwari, nekudzidzisa zvinhu izvo zviri kuna Ishe Jesu Kristu, nokutendeka zvose, pasina chipingaidzo.